ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက နယ်မှာ နေခဲ့ရစဉ်က ဘဝလေးကို ခုတလော အရမ်း သတိရမိတယ်.....ကျမ တို.ခြံစည်းရိုးက ပုံနရိတ် ပန်းပင်တွေနဲ.ခြံစည်းရိုးလုပ်ထားတာ တော်တော်လေးထူသလို လှလဲ လှပါတယ်..ခြံထောင့်မှာတော့ သက်တမ်းရင့် ညောင်ပင်ကြီး ရှိပါတယ်...ညောင်ပင်ပေါ်က ညမွှေးပန်းလေးတွေရဲ့ ရနံ့ကို ကျမ အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်... အဲ့ဒီ ညောင်ကိုင်းတွေက အိမ်ခေါင်မိုးနဲ.လာထိနေတတ်ပါတယ်...အဲ့ဒီကနေတဆင့် တောက်တဲ့တကောင်ဟာ အိမ်ကိုရောက်လာတာပါပဲ..သူဟာ နံရံထုပ်တန်းတွေ မီးချောင်းတွေပေါ်မှာ ရှိတတ်ပါတယ်...မီးချောင်းဆိုလို. နိမ့်နိမ့် မီးချောင်းလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး... ကြမ်းပြင်နဲ. မျက်နှာကျက်က တော်တော်ဝေးပါတယ် .... အမြင့်ကြီးပါ.. .. အဲ့ဒီ တောက်တဲ့ တွေရဲ့ အကြောင်းကို လူကြီးတွေ ပြောပြတာကတော့ တောက်တဲ့တွေဟာ နေရာတနေရာ ကို ရောက်ရှိကပ်မိပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီနေရာကနေ မခွာတော့ဘူးတဲ့ ...သူတို.ဘယ်အချိန်ကျမှ ခွာတတ်သလဲဆိုရင် မိုးကြိုးပစ်မှတဲ့.. အဲ့ဒီတော့ ကျမ က တောက်တဲ့ ပြုတ်ကျပြီး ကျမ ကိုယ်ပေါ်လာကပ်နေမှာ အရမ်းကြောက်တတ်ခဲ့တာပါ.......
အဲ့ဒီ တောက်တဲ့ အကြောင်း စဉ်းစားမိတုန်း ဘလော့တခု မှာ ပုံ၂ ပုံတွေ.လိုက်တော့ ကျမ စိတ်ထဲမှာ တောက်တဲ့မှတ်လို........ တွားသွားသတ္တဝါတွေ ဖြစ်တဲ့ မိကျောင်း ၊ အိမ်မြှောင်၊ တောက်တဲ့ ၊ ဖွတ် ၊ ပုတ်သင်ညို စတာတွေက အမျိုးတွေပဲလေ....... အဲ့တော့ ကျမလဲ အဲ့လိုထင်တာပေါ့...............
နောက်မှ ခေါင်းစဉ်နဲ. ပို.စ်အရ မိကျောင်းနဲ. အိမ်မြှောင် ဆိုတာ သဲကွဲခဲ့တာ....
ကျမ သာ အဲ့ဒီ ပုံ ၂ ပုံ သက်သက်ပဲ တခြားနေရာမှာတွေ.ခဲ့ရင် တောက်တဲ့နဲ.ဖွတ်လို.ပဲ ထင်မိမှာ.......
ခုခေတ် ခေတ်သစ် (သို.) ခေတ်ပေါ်ဖွတ်တွေက တောက်တဲ့လိုပဲ အကျင့်စရိုက်ကလေးတွေက တူလာပါတယ်.....တောက်တဲ့ လို နေရာမြဲအောင်....ရရာနေရာ ကနေခွာဖို.လုံးဝကို မစဉ်းစားတာပါ.....အဲ့ဒီတော့ တောက်တဲ့ရဲ့ အကျင့်နဲ.ဖွတ်ရဲ့ စရိုက်တွေ ပေါင်းထားတဲ့ ခေတ်သစ် (သို.) ခေတ်ပေါ် ဖွတ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို တားဆီးကြရပါမယ်....ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို.မှန်းသိရင် အရမ်းကို နောက်ကျသွားမှာမို. ဖွတ်မထွက်ခင်ကတည်းက တောင်ပို.မှန်း အချိန်မီ သိနိုင်ကြစေဖို့
“ထောက်ခံတယ်…ထောက်ခံတယ်” လို့ ကြံ့သုံးလေးကောင်နဲ့ ဖွတ်သုံးလေးကောင်က ၀ိုင်းအော်လိုက်ကြတာ အသံတွေတောင် ပြာလို့
“ထောက်ခံတယ်…ထောက်ခံတယ်” လို့ ကြံ့သုံးလေးကောင်နဲ့ ဖွတ်သုံးလေးကောင်က ၀ိုင်းအော်လိုက်ကြတာ အသံတွေတောင် ပြာလို့"ခွေးခြသေ့င်္ရဲ့ ‘အစာ’ မဖြစ်ချင်ကြရင် သက်သက်လွတ်စားတဲ့ သူတော်စင် ၀ံကြီးတွေကို အားကိုးကြ" လို့ ၀ံကြီးတကောင်က မသိနားမလည်တဲ့ တောသတ္တ၀ါတွေကို ပြောတော့…“ထောက်ခံတယ်…ထောက်ခံတယ်” လို့ ကြံ့သုံးလေးကောင်နဲ့ ဖွတ်သုံးလေးကောင်က ၀ိုင်းအော်လိုက်ကြတာ အသံတွေတောင် ပြာလို့ရိုးမတောတခွင်မှာ ၀ံကြီးတွေ တော်တော်များများ ရှိနေပါတယ်။ အကောင် နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက်ရှိမလားဘဲ။ အဲဒီဝံကြီးတွေဟာ ခေါင်းကြီး၊ ပါးစပ်ကြီး၊ ခြေကြီးလက်ကြီး၊ ကိုယ်လုံးကြီး အစွယ်ပြူးပြူး ခြေသည်းလက်သည်းကလည်း သံမဏိချိတ်ကောက်ကြီးတွေလိုမို့ တောသတ္တ၀ါအများစုခမျာ အသံကြားရုံနဲ့တင် “လန့်” နေကြတာ မဆန်းလှပါဘူး။အဲဒ်ီဝံကြီးအားလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကတော့ “၀ံကြီးချုပ်” ပါပဲ။ ၀ံကြီးချုပ်က နဖူးပြောင်နေပေမယ့် အစွယ်ထက်တုန်းမို့ တခြားဝံကြီးတွေက ကြောက်ရွံ့ခန့်ညားကြပါတယ်။အခုတလောမှာ ၀ံကြီးချုပ်ကအစ ၀ံကြီးတွေအားလုံး အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။ ရိုးမတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လျှောက်သွားနေကြတာ ဘာကြောင့်ဘာလိမ့်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ ငယ်နိုင်၊ ငယ်ဆရာ ခွေးခြသေ့င်္ကြီးက တချက်လွတ်အမိန့် ထုတ်ထားတယ်လေ။“အရောင်ပြောင်းထားတဲ့ မင်းတို့ဝံကြီးမှန်သမျှ အရှေ့ရိုး-အနောက်ရိုး-တောင်ရိုး-မြောက်ရိုးအနှံ့ ခရီးထွက်ကြပြီး တောနေသတ္တ၀ါအားလုံးကို ဖြားယောင်း၊ လိမ်ညာ၊ ခြိမ်းခြောက်စည်းရုံးကြရမယ် အမိန့်တော်…”ဒီလိုနဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ တောသတ္တ၀ါတွေကို ဟိုမှာစုရုံးခိုင်း၊ ဒီမှာစုရုံးခိုင်းပြီး ၀ံကြီးတကောင်ပြောပုံက…“မင်းတို့အားလုံး…နောင်မှာ ခွေးခြသေ့င်္ရဲ့ ‘အစာ’ မဖြစ်ချင်ကြရင် သက်သက်လွတ်စားတဲ့ သူတော်စင်ဝံကြီးတွေကို အားကိုးကြ၊ ငါတို့က အသားမစားဘူးဆိုတော့ ရှေ့လျှောက် မင်းတို့တတွေ အသက်ရှည်ရှည်နေကြရအောင် ငါတို့ကို ထောက်ခံကြပေတော့”“ထောက်ခံတယ်…ထောက်ခံတယ်”ကြံ့သုံးလေးကောင်နဲ့ ဖွတ်သုံးလေးကောင်က ၀ိုင်းအော်လိုက်ကြတာ အသံတွေတောင် ပြာလို့။ အသံတွေတိတ်သွားချိန်မှာ ယုန်ဖြူလေးတကောင်က ခြေဖျားထောက်ပြီး မရဲတရဲမေးရှာပါတယ်။“ကျနော်ကြားတာက အဘတို့ ၀ံကြီးအားလုံးဟာ ခွေးခြသေ့င်္ကြီးရဲ့ နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်နေတာကြာလို့ အခု အသားစိမ်းစားသတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား”စကားဆုံးတာနဲ့ သစ်ငုတ်တိုပေါ်က ၀ံကြီးဟာ ယုန်ကလေးကိုခုန်အုပ်ပြီး ခြေနှစ်ချောင်း ဆွဲဖြဲလိုက်ပါတော့တယ်။ တဆက်တည်း နှစ်ခြမ်းကွဲ သေပွဲဝင်သွားတဲ့ ယုန်ကိုယ်နှစ်ပိုင်းကို အစွယ်ဖြူဖြူပါစပ်ပြဲကြီးထဲ ပစ်ထဲလိုက်ပါရော။ အဲဒီနောက်… သစ်ငုတ်တိုပေါ် ပြန်တက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သိမ်းရင်း ထပ်ပြောတာက…“မင်းတို့တတွေ နောင်ကာလမှာ ခွေးခြသေ့င်္ကြီးရဲ့ ‘အစာ’ မဖြစ်ချင်ရင် ငါတို့ကို အားကိုးကြဟေ့…”[Credit: ယမထာ NEJ]
17 October 2010 at 01:35
ဖွတ် မိကျောင်းဖြစ်၊ မြစ်မချမ်းသာ
ဖွတ် မိကျောင်းဖြစ်၊ မြစ်မချမ်းသာ“ဖွတ်ဝမ်း” ခေါ် “ဖွတ်ငကျောက်ဆည်” ကြီးဟာ သူ့ကိုယ်သူ “ဒုတိယဖွတ်မင်းဆက်” တည်ထောင်သူလို့ ကြွေးကြော်ပြီး နောက်တော်ပါ “ဖွတ်မိကျောင်း” လက်တဆုပ်နဲ့ ရေပြင်တကြော၊ ကုန်းမြေတကြောမှာ ထင်တိုင်းကြဲနေခဲ့တာ ကြာလှပါပကောလား။ဖွတ်မင်းဆက်အစတုန်းကတော့ ဖွတ်ပေါ့။ အချိန်လေး နည်းနည်းကြာလာ… သက်တမ်းလေး တော်တော် ရလာတဲ့အခါ အကောင်က တဖြည်းဖြည်းကြီး၊ အမြီးကလည်း တဖြည်းဖြည်း ရှည်လာပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီဖွတ်ကြီးဟာ နီးရာမြစ်ထဲချောင်းထဲ “၀ုန်းခနဲ” ခုန်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ “မိကျောင်း” ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဖွတ်ဘ၀ကနေ ပြောင်းလာတဲ့ “ဖွတ်မိကျောင်း” ဆိုတာ အဲဒီသတ္တ၀ါပါပဲ။နောက်တဆင့်မှာတော့ အဲဒီဖွတ်ကဖြစ်လာတဲ့ မိကျောင်းတွေဟာ မိကျောင်းသက် ရင့်လာတာနဲ့အမျှ သဘာဝအတိုင်း ခြေလက် ဦးခေါင်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တွေ ကြီးမား ထွားကျိုင်းလာကြပြန်ရော။ အရေခွံတွေကြမ်းထော် အမြီးကြီးတွေ ဆူးတောင်ပေါက်၊ ခေါင်းကြီး၊ ပါးစပ်ကြီးတွေ ပြဲကားရှည်ထွက်လာလိုက်တာ တစ်တောင့်ထွာကနေ နှစ်တောင့်ထွာ၊ နှစ်တောင့်ထွာကနေ သုံးတောင် (လေးပေခွဲ) ဖြစ်တဲ့ကောင်က ဖြစ်သွားပါလေပြီ။မိကျောင်းဆိုတာ ခေါင်းသုံးတောင်ပြည့်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ထူးခြားတဲ့ တန်ခိုးအစွမ်းတွေ ရှိလာပါတော့တယ်။ ဆန္ဒရှိရင် မိကျောင်းအရေခွံကို ချွတ်ပြီး “ဖွတ်ဒိုင်နိုဆောကြီး” အဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားလို့ ရသွားပြီလေ။ နောက်ပိုင်းမှာ သမိုင်းပညာရှင်တွေက “ဖွတ်ဒိုင်နိုဆော” ကို “ကြံ့ဖွတ်”လို့ အမည်ပေးကြပါတယ်။နောက်ဆုံး ဖွတ်မိကျောင်းမျိုးဆက်မှာ ပထမဆုံး ခေါင်းသုံးတောင်ပြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးကတော့ “ငကျောက်ဆည်” ဆိုတာပေါ့။ဖွတ်ပေါက်စ ဘ၀ကနေ ဖွတ်ကြီးဖြစ်လာချိန်မှာ ကျောက်ဘောင်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရှေးဟောင်းဆည်ကြီး တဆည်ထဲ ခုန်ဆင်းပြီး “ဖွတ်မိကျောင်း” စဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးမို့ “ငကျောက်ဆည်” လို့ ခေါ်ကြတာပါ။ပထမဆုံး ခေါင်းသုံးတောင်ပြည့်ခဲ့တဲ့ “ငကျောက်ဆည်” ကို မိကျောင်းဘာသာစကားနဲ့ “ဖွတ်ဝမ်း” ရယ်လို့ တလေးတစား ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် ခေါင်းသုံးတောင်ပြည့်တဲ့ ကောင်ကို “ဖွတ်တူး”၊ သူ့နောက်မှာ “ဖွတ်သရီး”၊ “ဖွတ်ဖိုး” စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ခေါင်းသုံးထောင် ပြည့်တဲ့ကောင်တွေ တော်တော်များနေပါပြီ။ဖွတ်တွေ မိကျောင်းဖြစ်ကုန်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မြစ်တွေ၊ ချောင်းတွေ ဒုက္ခရောက် ကြရပါတော့တယ်။ ရေနေသတ္တ၀ါမှန်သမျှ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရ စားကောင်းခြင်းမစားရ၊ အစာရေစာ ရှာရခက်၊ အသွားခက်အလာခက်၊ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ စုစုဝေးဝေး နေခွင့် မရှိတော့တဲ့အပြင် မထင်ရင်မထင်သလို “ဖွတ်မိကျောင်း” တွေရဲ့ အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၊ အနိုင်အထက်လုပ်မှု၊ မတော်မတရား အဓမ္မကျင့်မှုတွေကို ခါးစည်းခံကြရပါတော့တယ်။ရေနေသတ္တ၀ါတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြသလို ကုန်းနေသတ္တ၀ါတွေခမျာလည်း “ဖွတ်မိကျောင်း” ဘ၀ပြောင်း “ဖွတ်ဒိုင်နိုဆော” တွေက နှိပ်စက်ကြလို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်။“ဖွတ်ဝမ်း” ကြီးဟာ သူ့ကိုယ်သူ “ဒုတိယဖွတ်မင်းဆက်” တည်ထောင်သူလို့ ကြွေးကြော်ပြီး နောက်တော်ပါ “ဖွတ်မိကျောင်း” လက်တဆုပ်နဲ့ ရေပြင်တကြော၊ ကုန်းမြေတကြောမှာ ထင်တိုင်းကြဲနေခဲ့တာ ကြာလှပါပကောလား။တနေ့မှာ ခေါင်းသုံးတောင်ပြည့် ထိပ်ပိုင်းဖွတ်မိကျောင်းတွေကို တကောင်မကျန် ဆင့်ခေါ်ပြီး “မင်းတို့အားလုံး မိကျောင်းအရေခွံတွေ ခုချက်ချင်း ချွတ်ပြီး ရာသက်ပန် ဖွတ်ဒိုင်နိုဆောတွေ လုပ်ကြပေတော့”"ချွတ်" ဆိုတော့လည်း ချွတ်ကြရတော့တာပေါ့။“ဖွတ်မိကျောင်းဘ၀ကို မေ့ပစ်လိုက်ကြပြီး ဖွတ်ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေအဖြစ် တောတောင် ကုန်းမြေအနှံ့မှာ ခြေကုပ်ယူကြ” “ကျုပ်ကော၊ အဘ” လို့ “ဖွတ်တူး” က ခပ်တိုးတိုးမေးတဲ့အခါ “မင်းက ငါ့အနားမှာပဲနေ၊ တနေ့ မတော်တဆ မြစ်ချောင်းတွေအနှံ့ ငါတို့ စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ လုပ်ခဲ့သမျှကို အထင်လွဲပြီး “ 'ကမ္ဘာ့မြစ်ရာဇ၀တ်ခုံရုံး' က မှားယွင်း တရားစွဲရင် ငါ့ရဲ့ အမှုတွဲ အဖြစ် မင်းပါ ရှိဖို့ လိုတယ်ကွ”“အဘကလည်း ဟိုကောင်တွေကျတော့ အမှုမတွဲပဲနဲ့”“သူတို့က အရေးမပါဘူးလေ။ အဓိက မင်းနဲ့ငါကွ။ ဖွတ်မင်းဆက်မှာ မင်းနဲ့ငါက 'နောက်ဆုံးဘိတ် ဂြိုဟ်ကောင် နှစ်ကောင်' ဆိုတာ မှတ်ထားပေတော့ ၊ ဖွတ်တူးရေ။”[Credit: ယမထာ NEJ]
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ၁၃ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပြီ
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ၁၃ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပြီစစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် မောင်အေး၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ရွှေမန်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သိန်းစိန်၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် တင်အောင်မြင့်ဦး၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သူရမြင့်အောင် (ဒူကြီး) အပါအဝင် စစ်ရာဇဝတ်ကောင် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်များ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ (war crimes) နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ (crimes against humanity) ကို စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးရန် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ချက်သမတနိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်၊ ဆလိုဗေးကီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယား နှင့် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ မဟုတ်သည့် သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနှင့် နယူးဇီလန် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၃ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
17 October 2010 at 02:00
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ "မကြာမီလာမည် ... မျှော်"
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ "မကြာမီလာမည် ... မျှော်"http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/cartoon/7-cartoon/4136-2010-09-24-11-59-25စစ်ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ် တရားစွဲဖို့ အိုဘားမားက ထောက်ခံထားခြင်း ခံရတဲ့ သန်းရွှေရဲ့ လူမိုက်ဝါဒကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က နှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ မြန်မာပြည်သားတွေကို သောင်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ မေလမှာလည်း နအဖ လူသတ်ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင် ပေးခဲ့တဲ့ အမိန့်ကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က အပြစ်မဲ့ အရပ်သား ၈၁ ယောက်ကို တနင်္သာရီတိုင်း၊ ခရစ်စတီကျွန်းပေါ်မှာ သွေးအေးအေးနဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။၂ဝဝ၃ ခု၊ မေလ ၃ဝ ရက်နေ့မှာလည်း လူမိုက် သန်းရွှေကိုယ်တိုင် စီစဉ်တဲ့ ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးမှာ စစ်သား၊ ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်တွေက အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁ဝဝ ကျော်ကို စနစ်တကျ အကွက်ဆင်ပြီး ရိုက်သတ်ပြီးပါပြီ။၂ဝဝ၇ ခု၊ စက်တင်ဘာလမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့နေကြတဲ့ ရဟန်းတော်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို နအဖ လူမိုက်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေက ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ခိုင်းလို့ အပြစ်မဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ၁ဝဝ ကျော် အသက်ဆုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။နအဖ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်လာတဲ့ နှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာလဲ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေနဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ "ရွာစု" တဲ့အခါ (အတင်း ရွာပြောင်းခိုင်းတဲ့အခါ) လက်နက်မဲ့ အရပ်သားတွေကို ဥပဒေမဲ့ လက်လွတ်စပယ် ရမ်းကား သတ်ဖြတ်လာတာလဲ သောင်းနဲ့ ချီနေပါပြီ။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့ရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ (war crimes) နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ (crimes against humanity) ကို စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းဖို့ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ဝင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ချက်သမတနိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်၊ ဆလိုဗေးကီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ လစ်သူယေးနီးယား နဲ့ EU ဝင်နိုင်ငံတွေ မဟုတ်တဲ့ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ နယူးဇီလန် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၃ နိင်ငံက ထောက်ခံထားတာပါ။အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်ကို ပုရွက်ဆိတ်လောက်တောင် တန်ဖိုးမထားပဲ သတ်ချင်သလို သတ်လာခဲ့တဲ့ လူသတ်ကောင် သန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ကာလဝိဘက်၊ နောက်ပိုးတက်ပြီး ဝဋ်လည်ဖို့ အချိန် နီးကပ်လာပါပြီ။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် မောင်အေး၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ရွှေမန်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သိန်းစိန်၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် တင်အောင်မြင့်ဦး၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သူရမြင့်အောင် (ဒူကြီး) အပါအဝင် စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ဟူကျင်းတောင်မှတပါး အခြား ကယ်မည့်သူမရှိတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်နေပါပြီ။
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့အတွက် သေမင်းခေါင်းလောင်းသံက တစတစ နီးကပ်လာပါပြီ
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့အတွက် သေမင်းခေါင်းလောင်းသံက တစတစ နီးကပ်လာပါပြီစစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ (war crimes) နဲ့ လူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေ (crimes against humanity) အပေါ် ကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့ စစ်ရေးကို အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံက ၁၃ နိုင်ငံမြောက် အဖြစ် ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့ကို CoI ဖွဲ့စစ်ဖို့ ချက်သမတနိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်၊ ဆလိုဗေးကီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ အိုင်ယာလန်၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နဲ့ နယူးဇီလန်၊ စုစုပေါင်း ၁၃ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပါပြီ။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် မောင်အေး၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ရွှေမန်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သိန်းစိန်၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် အောင်သောင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် မောင်သောင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် တင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ တခြား နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေအဖြစ် တရားစွဲဖို့ ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့ရေးကို ထောက်ခံတာပါ။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့ အဖွဲ့ကို တရားစွဲဆိုမယ့် အမှုတွေကတော့ ------ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးအပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊- ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကို ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု၊- လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ မတရား ဖမ်းဆီး ထောင်ချမှု၊- တိုင်းရင်းသားများကို မတရားဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်မှု၊- မုဒိန်းကျင့်မှု၊- အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်မှု၊- စစ်သားများကို ဖျော်ဖြေရန် မိန်းမကောင်းများကို အတင်းအဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ခိုင်းမှု၊- ရွာမီးရှို့ မှု၊- အတင်းအကြပ် ပေါ်တာဆွဲပြီး မိုင်းရှင်းရာမှာ အသေခံခိုင်းမှု၊- လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအစရှိတဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေ (war crimes) နဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်မှုတွေ (crimes against humanity) နဲ့ တရားစွဲဆိုမှာပါ။အဓိကက သန်းရွှေရဲ့ စစ်တပ်က လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ နှိပ်စက်မှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်ကျူးလွန်နေလို့ အဲဒီ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေအပေါ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စစ်ဖို့ အိုဘားမားက ကုလသမဂ္ဂကို တောင်းဆိုထားတာပါ။စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် ဗိုလ်ချုပ်တွေကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ရေးဟာ ဒီတခါမှာ အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာ များပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ -----(၁) အမေရိကန်လို အင်အားကြီးနိင်ငံက စပြီး တရားဝင် တောင်းလာတာ။ အရင်က မတောင်းဘူးဘူး။ ကွန်ဂရက်ထက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုရှိတဲ့ အိမ်ဖြူတော်က သူ့မှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်ကို အစွမ်းကုန် သုံးမယ်လို့ ကတိပေးထားပါတယ်။(၂) နအဖရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် အထွေထွေညီလာခံမှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်စဉ်က နိင်ငံပေါင်း ၈၈ နိင်ငံ (အများစု) က ထောက်ခံမဲ ပေးထားဘူးတယ်။အဲဒီအချက် နှစ်ချက်ကြောင့် စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေနဲ့ တခြား စစ်ရာဇဝတ်ကောင် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ရေးဟာ ဒီတခါမှာ အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာ များတာမို့လို့ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေတို့အတွက် သေမင်းခေါင်းလောင်းသံက တစတစ နီးကပ်လာပါပြီ။
ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်မနေနဲ့၊ ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်း သိမယ် (အပိုင်း - ၁)
ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်မနေနဲ့၊ ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်း သိမယ် (အပိုင်း - ၁)“ခွေးတိုးပေါက်၊ ငါးမျှားချိတ် နဲ့ ဖွတ်” .....ကျနော် ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်လေးတခု သတိရမိတယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စစ်တိုက်တန်း ကစားကြတာ ကစားရင်းနဲ့ ခြံစည်းရိုးတခု နားရောက်တော့ အောက်ခြေမှာ အပေါက်သေးသေး လေးတခုတွေ့တယ်- ခွေးတိုးပေါက်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ ကစားရင်းနဲ့ အရှိန်လေးကလည်း ရှိတော့ ခလေးပဲ ဆိုတော့ တဖက်ရောက်ဘို့ တိုးဝင်လိုက်တာ ကျောကုန်းမှာ ခြံစည်းရိုးနဲ့ ငြိကရော သွေးတွေထွက်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ငိုတော့တာပေါ့ဗျာ- ပြီးတော့ ကျနော့်ဘဘဆီကိုအော်ပြေးတော့တာပေါ့ ဘဘက မေးတယ် "မင်း ဘာဖြစ်လာတာလဲ" တဲ့ "ကျနော် ဟိုအပေါက်ကလေးက တိုးဝင်လိုက်တာ အခုလို ဖြစ်သွားတာ" ဆိုတော့ "တယ် ဒီကောင်လေးနယ် အဲ့ဒါ ခွေးတိုးပေါက်လေးပဲကွ မင်းက လူလေ ခွေးမှ မဟုတ်တာ ဖြစ်ပြီမလား လာခဲ့" ဆိုပြီး အရက်ပြန်နဲ့ သုတ်တော့ အော်ခဲ့ရတာလေး မှတ်မိနေသေးတယ်။ (စကားချပ်)အခုလဲလေ နအဖစစ်အုပ်စုက လုပ်မဲ့ "၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ" ဆိုတဲ့ အပေါက်ကနေ တိုးဝင်ကြဘို့လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက် ကျနော် စဉ်းစားမိနေတာကတော့ ကျနော်ငယ်ငယ်က ခွေးတိုးပေါက်က တိုးဝင်သလို ဖြစ်နေမလား တွေးမိတာ။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ "အခြေခံဥပဒေ" ဆိုတာကြီး တခုလုံးကလည်း ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိ (ဥပမာ။ ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလို့ရအောင်တောင် ဥပဒေထဲ ထည့်ရေးထားတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမှမရှိဘူး) ဒါကြီး အောက်မှာမှ ကော်မရှင် ဆိုတာလဲ စစ်အုပ်စုစိတ်ကြိုက် လူတွေနဲ့ ဥပဒေကလဲ မတရား ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဘာဖြစ်လာမလဲ ရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးနော်။ ကြံဖွံအသင်းကနေ အခု ပါတီဖြစ် သွားပြီ။ ဒါကို ကြံဖွံအသင်း ဆိုတာကြီး စစ်အုပ်စု လုပ်ကတည်းက ထောက်ပြခဲ့ကြတာပဲ တချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်မှာပါ ဆိုတာလေ။ ဒါကိုပဲ တလောလေးက ကြားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီအပေါက်က နေတဆင့် သွားသင့်တယ်လေး ဘာလေး မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်လေးတွေ စာတမ်းဖတ်တယ် ဆိုလား ဘာလား။ အေးဟေ့ အားနာနာနဲ့ ပြောရရင် အဲ့ဒါ ခွေးတိုးပေါက်ဟေ့ ခွေးတိုးပေါက် ဟ ။ "စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ" ဆိုတာကြီးကို စစ်အစိုးရက "သွားပါ့မယ်" ပြောပြောနေတာလေ ဒီလောက်မှဖွင့် မထားရင်ဘယ်ရမလဲ။ ဒါကို "အခွင့်အလမ်း" ဆိုပြီး မှန်းနေကြတာ တော်တော်လေးကို ခက်နေကြပါကလား။အခုပဲကြည့်လေ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်ရက်စမယ် မပြောသေးပေမဲ့ ကြံဖွံပါတီကြတော့ လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ်နေကြတာ ဗိုလ်သိန်းစိန်တောင် ဦးသိန်းစိန် လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ကျန်တဲ့ပါတီတွေ ကြတော့ ဘာမလုပ်နဲ့ ညာမလုပ်နဲ့ အိုဗျာ.. စုံနေတာပဲ ဒါလားဒီမိုကရေစီ သွားချင်တာ။ ဗမာစကားပုံတွေကစုံနေတော့ ထပ်ပြောခြင်သေးတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ စစ်အုပ်စုက ငါးစာချထားတာ-ဟင်း… ပြေးဟတ် လိုက်လို့ကတော့ ငါးမျှားစာ မိပြီသာမှတ်၊ လွတ်တော်ထဲ အတိုက်အခံတွေ မရောက်နိုင်အောင် ဂွင်ဆင်ပြီးသားကြီး ရှင်းနေတာပဲလေ။ တိုင်းရင်းသား ပါတီတချို့ အခုထိတောင် မှတ်ပုံတင်လို့ မရသေးဘူး စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ အကွက်စိအောင် သေသေချာချာ လုပ်နေတာ ရှင်းနေတာပဲ အာဏာ သူတို့လက်ထဲကနေ လွတ်မသွားအောင် ပုံစံတမျိုးနဲ့ ဂွင်ဆင်ထားတာကြီး။(အပိုင်း - ၂) သို့ ဆက်ဖတ်ပါရန်
ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်မနေနဲ့၊ ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်း သိမယ် (အပိုင်း - ၂)
ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်မနေနဲ့၊ ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်း သိမယ် (အပိုင်း - ၂)(အပိုင်း - ၁) မှ အဆက်အခုတလော ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ အဖွဲ့တွေပဲ မီဒီယာမှာ ငြီးသံလေးတွေစုံလို့ ကြားလာရတာ တချို့ကြတော့လဲ နီးစပ်ရာလေးတွေ ညီးပြသဗျ ဒီပုံဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ်သလေး ညာဖြစ်သလေး ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ နီးလာလေ သူတို့ လုပ်ရကိုင်ရတာ ကြပ်လာလေနဲ့ တူပါတယ်လေ။ အစကတည်းက "ဒါကြီး (၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီး) က လိမ်ဆင်ကြီးပါ" ဆိုတော့ ဒီအပေါက်ကပဲ တိုးဝင်ရမယ် ဆိုသလိုလို အခုတော့ ငြီးလာလိုက်ကြတာလေ။ ကျနော် တွေးမိတယ်လေ အော်… အိပ်များ ငိုက်လာလိုက်ကြ သလားလို့။ ဟုတ်တယ်လေ ကြာလေ ဘီလူးရုပ်က ပိုပီပြင်လာလေ ဆိုတော့ ဖြစ်ကြမှာပေါ့လေ လူ့သဘာဝကိုး။ဒီတော့ အကြံလေး ဘာလေး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ် ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်ကြီး၊ သေးများကို အကြံပေးခြင်သဗျာ။ အခုကတည်းက မတရားတာတွေကို စံနစ်တကျ ထောက်ပြကြပါ စုနိုင်သမျှ စုပြီး လုပ်ပေး၊ တောင်းဆိုပေး။ လူထုကို စည်းရုံးလို့ရသလောက် ဂွင်ကနေ "ဒီဟာကတော့ မတရားတာ ၊ ဒါကတော့ မဖြစ်သင့်တာ" ဆိုတာကို "တိုင်းပြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့် ပြောင်းလဲမှုဆီ သွားချင်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ သူတွေက "လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့ အလုပ်" လို့ ထင်တာပဲ။ဒါ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်လေးတွေကို တရားသဖြင့် လုပ်တာလို့ ကျုပ်ကတော့ ထင်တာပဲ၊ ကျုပ်တို့ကတော့ (၂၀၁၀) အစကတည်းက လက်မခံဘူး ဒီတော့ ကျုပ်တို့ အလုပ် ဆက်လုပ်သွားကြမှာပါ စိတ်ချပါ။ ဒီလို မဟုတ်လို့ကတော့ နောက်ထပ် စကားပုံလေးတခု ပြောရအုံးမယ်ဗျာ၊ "မွဲခြင်တဲ့ ခွေးပြာပုံတိုး" တဲ့။ လိုအပ်သလိုသာ တွေးကြပေတော့ဗျို့။ ခင်ဗျားတို့နဲ့(ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ချင်တဲ့သူတွေ) နဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲချင်တာတော့ တူလောက်တယ် ထင်တာပဲ။ မတူတာက စဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ကိုင်ပုံပဲ။ ထားလိုက်ပါတော့လေ ဗန်းမော်ဆရာတော် စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဖွတ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ကလည်း ဖွတ်၊ မိန်းမကြိုက်တဲ့ကောင်ကလည်း မိန်းမလို့ ပြောသွားတာတော့ ကြားဘူး၊ ဖတ်ဘူးပါတယ်။အော်၊ ကျန်သွားလို့ထပ်ပြောပါရစေဗျာ။ ဘာတဲ့.. အော်၊ "ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်တာ ဖွတ်ထွက်လာမှ တောင်ပို့မှန်းသိတော့တယ်" ဆိုသလို ဆိုရင်တော့ ကျိန်းသေတယ်ဗျို့၊ ထွက်လာမဲ့ဖွတ်က ကြံဖွတ် ဆိုတာတော့ ကျိန်းသေတယ်။ထွန်းထွန်း (လူ့ဘောင်သစ်)[Credit: Dawnmanhon]
အားလုံး ပါဝင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်
အားလုံး ပါဝင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်(ဟန်လေး ကာတွန်း)http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/cartoon/7-cartoon/4204-2010-10-02-12-14-30
ကြံ့+ ဖွတ် ဦးနှောက်က ဈေးအကြီးဆုံးပါ
ကြံ့+ ဖွတ် ဦးနှောက်က ဈေးအကြီးဆုံးပါဦးနှောက်ဟင်းသတင်းထောက် တယောက် ဆောင်းပါရေးရန် လမ်းပြနှင့်အတူ လူသားစားလူရိုင်းများ နေထိုင်ရာဒေသကို ရောက်လာသည်၊၊လမ်းပြက ပြောလိုက်သည်။ “ရှေ့မှာ ထမင်းဆိုင် ရှိတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟင်းတွေ ရတတ်တယ်၊”သတင်းထောက်ဆိုင်ထဲ ၀င်လိုက်သည်၊ ကောင်တာရှေ့တွင် ကြော်ညာသင်ပုန်းတချပ် ထောင်ထားသည်။ယနေ့အထူးဟင်းလျာဦးနှောက်ဟင်းများ> ဆရာဝန်ဦးနှောက် ၅၀ သား ---------------- ၅၀၀၀ ကျပ်> ရှေ့နေဦးနှောက် ၅၀ သား ----------------- ၆၀၀၀ ကျပ်> ကျောင်းဆရာဦးနှောက် ၅၀ သား ------------- ၇၀၀၀ ကျပ်> ကြံ့+ ဖွတ် ဦးနှောက် ၅၀ သား ------------- ၄၀၀၀၀ ကျပ်သတင်းထောက်က တအံ့တသြ မေးမိသည်။ “ကြံ့+ ဖွတ် ဦးနှောက်က တော်တော် စားကောင်းသလား။”မြန်မာစကား တတ်သော ဆိုင်ရှင် လူသားစားလူရိုင်းက ၀င်ဖြေလိုက်သည်။“မဟုတ်ပါဘူး၊ ဦးနှောက် ၅၀ သား ပြည့်ဖို့ ကြံ့ဖွတ်တွေ အများကြီး သတ်ရလို့ပါ၊”kiki
ဒီဘလော့လေးက လူတန်းစားပေါင်းစုံလာတတ်လို့ အားရင်တော့ ခနလေးတော့ရောက်လာတတ်တယ်။ မsv ပြောသလိုဘဲ တောက်တဲ့၊ဖွတ်၊အိမ်မြောင်၊မိချောင်းတွေ ဟာကြည့်ရတာ ပုံစံ အတူတူဘဲနော်။ အကြီးအသေးဘဲ ကွာတယ်။ ကျမအမြင်နဲ့ပြောရရင် အများနားလည်လွယ်အောင် မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မိအောင် တခုခုနဲ့ ပုံစံပြောချင်တယ်။ အဲဒါကတော့ စစ်သားတွေနဲ့ နှိုင်းပြောမှ ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခုလက်ရှိအချိန်က စစ်သားတွေဆို လူတိုင်းသိနေတယ်လေ။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့က စူပါမင်းသားတွေလို နေရာတကာမှာ နာမည်ကြီးနေတာလေ။ မုဒိမ်းကျင့်တာတို့၊ ဓါးမြတိုက်တာတို့၊ မြို့ပေါ်တက်ပြီး သေနတ်နဲ့ ၀င်ဆွဲတာတို့ လုပ်နေတော့ ကျမတို့နိုင်ငံသာမက ဒိပြင်နိုင်ငံတွေကလည်း မြန်မာပြည်က စစ်သားဆိုလူတိုင်းကသိနေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်တော့ သတင်းကြီးတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောမယ်လို့ ပြောရတာ။ စစ်သားတွေက နေရာတကာမှာ စုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နေရာတကာမှာ အသင်းအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ နေတတ်ကြတာလေ။ ဥပမာ တပ်မ(၈၈)၊ တပ်မ(၂၂)၊ တပ်မ(၆၆) ဆိုပြီး ဂိုဏ်း လေးတွေ ကွဲနေသလိုမျိုးပေါ့။ ဒီအတိုင်းဘဲ တောက်တဲ့တို့၊ ဖွတ်တို့၊ အိမ်မြောင်တို့ လည်း သူ့အုပ်စုနဲ့ သူနေတတ်တဲ့ ဂိုဏ်းကွဲလေးတွေလို့ မြင်မိတယ်လေ။ ဘာတဲ့ မsv ပြောတာ တောက်တဲ့တွေက မိုးကြိုးပစ်မှ ကွာတယ်ဟုတ်လား၊ ဒါဆို ဖွတ်နဲ့အိမ်မြောင်ကရော မိုးကြိုးပစ်ရင် မကွာဘူးလား။ သူတို့တွေက အမျိုးတူတွေလေ၊ ဂိုဏ်းဘဲကွဲတာလေ၊ ကျမကြားတာက ခုတလော ဖွတ်တွေကို မိုးကြိုးပစ်နေတယ်လို့ ကြားမိလို့။ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလဲ ပစ်တယ်။ ရခိုင်ပြည် ဘက်မှာလဲ ပစ်တယ်လို့ ကြားမိလိုက်သလိုဘဲ။ ကျမကဒေါ်လာစား မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျောင်းတက်နေတုန်းပါ။ ကျောင်းပြီးလို့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရင် ကိုယ့်အမိမြေကို ပြန်ပြီးတော့ နိုင်ငံတိုးတက်အောင် အမြှောက်စက်ရုံတို့။ နြူကလီးယားဗုံးတို့၊လက်နက်တွေကို ထုတ်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်ဆောင်ချင်တယ်လေ။ သူတို့ပြောတော့ နြူကလီးယားလက်နက်တွေ မထုတ်လုပ်သေးဘူးဆိုလို့ပါ။ သွားတော့မယ် မsv ရေ.. တော်ကြာ အမခွေးခြံထဲက ခွေးတွေ ထွက်ကိုက်နေအုန်းမယ်။ ခွေးတော့ကြောက်တယ်။ ပြေးပြီ အမရေ..
အမတင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်က မိတယ်။ ခေတ်သစ်ဖွတ်တဲ့။ တောက်တဲ့ တွေက မိုးကြိုးပစ်မှ ကွာတယ်ဆိုတော့ ဖွတ်တွေကရော မိုးကြိုးပစ်ရင် မကွာဘူးလားဟင်။ ခုတလော ဖွတ်တွေကို မိုးကြိုးပစ်နေတယ်တဲ့ အမရေ။ ကွာလား မကွာလားတော့ မသိဘူး။ ဆေးရုံသွားပြီး ချုပ်ရတယ်တဲ့။
ညီမSV : မှန်ပါတယ်။ ဦးဦး တို့ ငယ်ငယ်တုံးက၊ မိဘတွေ အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်၊ တောက်တဲ့ ကပ် မိပြီဆိုယင်၊ မိုးကြိုးပစ်မှ ကွာကျတယ်တဲ့။ တချို့ကလည်း ကြက်သွန်နီ နဲ့ ပွတ်ရတယ် လို့ဆိုတယ်။ ဦးဦး တို့လည်း တခါမှတော့ လူကို တောက်တဲ့ ကပ်တယ်လို့ မကြားမိသေးဘူး။မိုးကြိုး ကလည်း လူပါသေသွားနိူင်လို့ ပစ်ဟန်မတူဘူး ထင်ပါရဲ့။ တောက်တဲ့ ထက် ဆိုးတဲ့ သတ္တဝါ တကောင် ရှိသေးတယ် .."ဖွတ်" ..တဲ့။ တောက်တဲ့ လိုဘဲ၊ ရှေးလူကြီးတွေ ဆိုရိုးစကား ကတော့ .. "ဖွတ် တက်ယင် မွဲ လိမ့်မယ်" တဲ့။ မိမိနေထိုင် တဲ့ အဝန်းအဝိုင်းထဲကို "ဖွတ်" တကောင် ဝင်လာပြီ ဆိုယင်၊ အဲဒီ အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုတွေ ဒုက္ခသုက္ခ ပေါင်းစုံ တွေ့ကြုံနိူင်တယ်လို့ ဆိုလိုဟန် နဲ့တူပါတယ်။မကောင်းတဲ့ နိမိတ် ပေါ့။ တောက်တဲ့ လူကိုကပ်တာ မမြင်ဘူး ပေမဲ့၊ ဖွတ် တက်လို့ မွဲ နေရတဲ့အကြောင်း တွေကိုတော့ ယနေ့ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ကြားသိနေရပြီ။ "ဈေးသုံးလဲမကြွယ်နဲ့ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့" ရှေးစကား ပြစ်ပယ်ထားလို့ မရဘူး၊ ကိုယ့် အိမ်ပေါ်ကို "ဖွတ်" မတက်နိူင်အောင်၊ ဖွတ် တွေ့ယင် ရိုက်ပုတ်မောင်းထုတ် ကြရပါမယ်။ ဖွတ် တက်ယင် 'မွဲ' မှာသေချာနေပြီ။အဲ.. ရှေးလူကြီးတွေ မေ့ပြီးမပြောပဲ ချန်ထားခဲ့ဒါလား မသိ။ တောက်တဲ့ လိုပဲ၊ ဖွတ် တက်လာပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲနေယင်၊ အဲဒိ ဖွတ် ကို မိုးကြိုးပစ် သတဲ့။ မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်မှာ ဖွတ်သုံးကောင် ကို မိုးကြိုးပစ်လို့ လူတွေဝမ်းသာနေကြတယ် ဆိုပဲ။ နတ်တွေတောင် ဖွတ် ဆို တော်တော် သောက်မြင်ကပ် နေပြီ။ ဒီတော့ ဦးဦးတို့လည်း နောင် နှစ်ပေါင်းတရာဆို ရှေးလူကြီးဖြစ်မှာ နောင်လာနောက်သားတွေ ရှေးထုံးမပယ်ရလေအောင် ဒီလိုရေးခဲ့မယ် "တောက်တဲ့ကိုတုလို့ ဖွတ်အစုတို့ အိမ်ပေါ်တက် မိုးကြိုးအမှန် ပစ် သတဲ့"။ [ တခါတလေ ဖွတ်တွေ အိမ်ပေါ်မတက်မီ လမ်းမှာတင် မိုးကြိုး ကြိုပစ် တာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်၊ခြေအနေအရ ကြည့်ပစ်တာဖြစ်မှာပေ့ါ၊ မိုးကြိုး ပဲ လက်ဖြောင့်ပြီသား၊ မဆိုင်သူ မထိအောင် ပစ်တတ်ပါတယ် ]
ဟိုက်....ပို့စ်တောင်မှ မတင်ရဲတော့ လောက်အောင်ပါပဲလား မSV ရယ်။ကျနော်က ကျနော့်ဖာသာ ရိုးရိုးရေးတာပါ။ မSV လုပ်တော့မှပဲ ကျနော်ကပဲ အစပြုပေးနေသလိုလို ဖြစ်နေပါရောလား။ အဲဒီလို ကျနော်က လုပ်ဇာတ် ၊ ဇာတ်ကွက် လုပ်ရေးတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ရပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရယ် ( အောင်မာ ...စိုင်းစိုင်း လိုလိုနဲ့ပါလား )
တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ လဒက တမှောင့်။ဘာမှတ်နေလဲ ဆိုတော့ မင်းလို အရူးကို အရူးလို့ ပဲ မှတ်တာပေါ့ဟ။သွားစမ်းကွာ ....... အရူးတွေနေတဲ့ နေရာမှာ သွားရူးချေ။လူတောထဲ လာလာ ရူးမနေနဲ့။
ဟိုက် ..... အခြေအနေ မကောင်းပါလား ......အောက်တန်းစား တုတ်ကြီး ဝင်မွှေနေတယ် ......vi848
တုတ်ကြီးဆိုတဲ့ ခွေးတတောင်းစားရေ...နင့်အမေ လုပ်စားတိုင်း ငါ့အမေကို ထိခိုက်တာတော့ နင် တော်တော် လွန်သွားပြီ...နင့်အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားပြီ...နင့်လို ခွေးမျိုးအတွက် ငါ့ဆိုဒ်မှာ နေရာမရှိပါ... so sorrysimple views
ဟေ့ ... တုတ်ကြီးမင်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ .........ယောကျာင်္းပဲကွာ ... ယောကျာင်္းလို ပြောစမ်းပါကွာ .........ထမီခြုံထဲက လက်ဝါးပြမနေပါနဲ့ ........မင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်ကြီး (သောက်ရူး ငသန်းရွှေ) လည်း တော်တော် သိက္ခာကျနေပြီ ........မင်းကိုယ်မင်း ယောကျာင်္းလို့ ထင်နေသေးရင် လာစမ်းပါအုံး ........စကားပြောကြရအောင် ..........ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပေါ့ကွာ ......... အေးဆေး ညှိတာပေါ့ကွာ ........vi848
ဟေ့ကောင် တုတ်ကြီးမိန်းကလေးတယောက်ကို မင်း ဘာလို့ အဲဒီလောက်ထိ အနိုင်ကျင့်နေရတာလဲ။မင်း အရည်အချင်းတွေက ဒါပဲလား။သတ္တိရှိရင် ယောကျာင်္းပီပီ ဆက်ဆံပါ။ယောင်္ကျားတန်မဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကို နှမချင်း မစာမနာ ဆဲရတယ်လို့ကွာ။ယောင်္ကျားသိက္ခာ ကျလိုက်တာ။ ထွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးကိုယ်နဲ့ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာကို အကျိုးအကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တုန့်ပြန်မှပေါ့။အခုတော့ သူများကို အမြင်ကတ်တာနဲ့ မင်းက ချီးနဲ့ငုံပြီး ထွေးသလို ဖြစ်နေပြီ။မင်း ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပြင်လိုက်ပါကွာ။ မကောင်းပါဘူး။Grandpa
အိမ်ရှင် Simple Views ၏ အောက်ထပ် ခွေးလှောင်အိမ်ထဲမှ လွတ်ထွက်လာသော ခွေး ငတုတ် ခေါ် ခွေး တုတ်ကြီး၏ အိမ်ရှင် Simple Views ၏ "ခွေးမဝင်ရ နယ်မြေ" အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အိမ်အပေါ်ထပ်က ဧည့်သည်
ခွေးမောင်းသံတွေနဲ့ စီကနဲ ညံကနဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတာ ဘာများလဲလို့ ..............အိမ်ပေါ်ထပ်ကို ခွေးငတုတ် တက်လာလို့လား ..............သြော် ........... သြော် ............ခွေးငတုတ်ကို အိမ်အောက်ထပ်က သူ့နေရာ ခွေးလှောင်အိမ်ထဲ ပြန်မောင်းသွင်းလိုက်ပီလား ..............vi848 ၊ Grandpa နဲ့ တုတ်ကြီးပထွေး ရေ ..... ကျေးဇူးပဲဗျို့ .............အေးဗျာ ......... ဒီ ခွေးငတုတ်က လူအလစ်မှာ ဒီလိုပဲ အိမ်ပေါ်ထပ်ကို တက်တက်လာတာ ............နောက်လဲ ခွေးငတုတ် အိမ်ပေါ်ထပ်ကို တက်လာတာ တွေ့ရင် အိမ်အောက်ထပ်က သူ့နေရာ ခွေးလှောင်အိမ်ထဲ ပြန်မောင်းပေးကြပါဗျို့ ............အိမ်ရှင် Simple Views ၏ အောက်ထပ် ခွေးလှောင်အိမ်ထဲမှ လွတ်ထွက်လာသော ခွေး ငတုတ် ခေါ် ခွေး တုတ်ကြီး၏ အိမ်ရှင် Simple Views ၏ "ခွေးမဝင်ရ နယ်မြေ" အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အိမ်အပေါ်ထပ်က ဧည့်သည်
ဒီ ငါးခုတ်ထီး တုတ်ကြီး တကောင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပါ နံကုန်ပြီ။ဘယ်ဥက ပေါက်တာလဲ ဆိုတာတော့ အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်မှာပါ။အော်ဂလီဆန်လွန်းလို့ဗျာ။ကျက်သရေ ယုတ်လိုက်တာ။Grandpa
မိဘတွေကတော့ သားသမီးတွေကို ယဉ်ကျေးစေချင်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် နဖားကြိုး ထိုးခံနေရတဲ့ အမျိုးတွေ ရိုင်းချက်ကတော့ စီဘောက်မှာတောင် ကမ်းကုန်အောင် ရိုင်းပြနေကြပါတယ် ZNM
`တုတ်ကြီး´ အမည်ခံ ရုရှားမှ ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ်သို့ဤ Simple Views ဘလော့သည် အမျိုးသမီးဘလော့ ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသမီး စာဖတ်ပရိသတ်များလည်း ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် မဆဲပါရန် နှင့် ရိုင်းစိုင်းသော စကားများကို မရေးသားပါရန် ရုရှားမှ ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် `တုတ်ကြီး´ ကို ထပ်မံ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။မဆဲရ မနေနိုင်လျှင်၊ ရိုင်းစိုင်းသော စကားများကို မရေးရ မနေနိုင်လျှင် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဆဲသည့် ဘလော့များသို့ သွားပါရန် အကြံပြုပါသည်။- ပိတောက်မြေ ဘလော့ http://padaukmyay.blogspot.com/- ကျေးစေတမန် ဘလော့ http://kyeesaytaman.blogspot.com/- အလင်းသစ် ဘလော့ http://alinthitt.blogspot.com/- ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံများ ( ပြည်ပ) ဘလော့ http://dollardollardollardollardollar.blogspot.com/- သာကီနွယ် (သို့) နွယ်သာကီ ဘလော့ http://tharkinwe.blogspot.com/- ဆန့်ကျင်ဖက် မျက်လုံး ဘလော့ http://oppositeyes.blogspot.com/အမြင်မတော်သူ
The landlady of 'SV Villa' is right to have done away with the kennel, much to our delight. The hell hound has been growling from the kennel night and day. On some occassions, the hound has even invaded onto the upper floor of the villa. So it is right of the landlady SV to have disowned the savage beast and let it becomeastray hound. Truth
စိတ်ရှည်လွန်းတဲ့ SV က C-Box မှာ ရေးထားမှပဲ တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ကောင်က ခွေးမသားမှန်း၊ ခွေးအမျိုးမှန်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရတော့တယ်။ခွေးဆိုတာမျိုးက လူလိုပြောလို့ နားမလည်တာကတော့ သေချာပါတယ်။သူတို့က ချီးစားတဲ့ အမျိုးတွေ။ZNM
စကားပြောကြရအောင် ဆိုတော့ အခြောက် တုတ်ကြီးက မပေါ်လာတော့ဘူး ..........တခြားဘလော့တွေမှာ လျှောက်သီးဆေးပြား သွားရောင်းနေပြီ ထင်တယ် ..........တုတ်ကြီး ကတော့ ချီးငုံပြီး မထွေးပဲ မျိုချနေတဲ့ ကောင်ဗျ ...........စီဘောက်ထဲတောင် အနံ့ တဟောင်ဟောင် ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့...........ထွီ .................................vi848
ခွေးမသား တုတ်ကြီး ............ မင်း တော်တော် အောက်တန်းကျတဲ့ ကောင်ပါလားကွ။ မိန်းမ ကို လာလာဆဲနေတာ။
အစ်မ SVေ၇အ၇မ်း ကျက်သေ၇တုံးတဲ့ အောက်က စီဘောက်ကို ဖြုတ်လိုက်လို့ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အစ်မ။အဲဒီ အမိယုတ် အဖယုတ်သားတို့ ပျော်စံ၇ာ စီဘောက်က အစကတဲက မလုပ်ပေးသင့်တာပါ။ဒီလို မကြားဝံ့ မနာသာ မိုက်မိုက်၇ိုင်း၇ိုင်း ဆဲေ၇းတတ်တဲ့၊ ကျက်သေ၇ ယုတ်တဲ့ စကားတွေနဲ့ ပုတ်ခတ်တတ်တဲ့ တုတ်ကြီး နဲ့ ခြင်္သေ့ လို လူစိတ်မ၇ှိသူတွေကို သူတို့အကြောင်း သိတဲ့နေ့ကစပြီး လုံးဝကို လက်မခံသင့်တာပါ။Hide IP Software သုံးပြီး နိုင်ငံ ၇ ခု - ၈ ခုလောက်က IP တွေနဲ့ နာမည်အမျိုးမျိုး သုံးပြီး လာဆဲ၊ လာပုတ်ခတ်တဲ့ တုတ်ကြီး နဲ့ ခြင်္သေ့ လို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လက်မခံသင့်တဲ့ လူစားမျိုးတွေကို လုံးဝကို chat ခွင့် မပေးသင့်တာပါ။ လူ့စည်းဝိုင်း အပြင်ဖက်ကို ထုတ်ပစ်ထားသင့်တာပါ။ဘလော့ဂါ ZNM ပြောတဲ့ "Hide IP Software သုံးသူများကို ဘန်းနည်း" ကို စနစ်တကျ သုံးပြီး ခြင်္သေ့ နဲ့ တုတ်ကြီးကို အစောကြီးကတဲက ၇ာသက်ပန် ဘန်းထားသင့်တာပါ။ယုတ်ညံ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လူတွေကို အစ်မက အခွင့်အေ၇း အများကြီး ပေးလိုက်မိလို့ နေ့တိုင်း ကျက်သေ၇မ၇ှိတဲ့ စာတွေကို ဖျက်၇တာ အလုပ်၇ှုပ်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်၊ အစ်မေ၇။လူမိုက်တွေကို လုံးဝ အဝင်မခံမှပဲ စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုး၇ှိ၇ာ၇ှိကြောင်း စာတွေကိုေ၇းဖို့၊ ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်၇မှာကို အစ်မ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ခြင်္သေ့ နဲ့ တုတ်ကြီး ၇ဲ့ လမ်းဘေးစ၇ိုက်နဲ့ ၇ိုင်းပျနေတာတွေ၊ မကြားဝံ့မနာသာ ဆဲဆိုနေတာတွေကို "လေးစားပါတယ်၊ ချီးကျူးပါတယ်၊ ဒါလဲ အ၇ည်အချင်းပဲ" ဆိုပြီး တဖွဖွ ထောက်ခံနေတဲ့ အိုပါး(ခေတ္တကိုရီးယား) ဆိုသူ၇ဲ့ လူမိုက်အားပေး၊ အဆိပ်ပင်ေ၇လောင်း စကားမျိုးတွေကိုလဲ ဖျက်သင့်ပါတယ်။အိုပါး(ခေတ္တကိုရီးယား) ဆိုသူ၇ဲ့ စကားမျိုးတွေဟာ ဒီမိုကေ၇စီ မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေးအခေါ် သိမ်ဖျင်းပြီး စိတ်သဘောထား ယုတ်ညံ့ အောက်တန်းကျတာပါ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး မကောင်းမှုကို လုပ်ဖို့ မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ပေးနေတာပါ။ဒီမိုကေ၇စီ အပြည့်အဝ ရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် သိက္ခာ၇ှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေဆို၇င် စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အပြင် မသိနားမလည်သူ လူငယ်လူ၇ွယ်တွေကို လမ်းမှားကို ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ အိုပါး(ခေတ္တကိုရီးယား) ၇ဲ့ ကွန်မန့်မျိုးတွေ ဆို၇င် မဖော်ပြပါဘူး။အစ်မလဲ ဒီမိုကေ၇စီ အပြည့်အဝ ရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက သိက္ခာ၇ှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ၇ဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ ဆင်ဆာကျင့်ထုံးအတိုင်း ကျင့်သုံး၇င် စာဖတ်သူတွေအတွက် ပို အကျိုး၇ှိမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ကောင်းမယ် ထင်တာလေးတွေ အကြံပေးကြည့်တာပါ၊ အစ်မေ၇။:)nge
ဖက်ခွက်စား တုတ်ကြီး သို့ ..... မင်း ခွေးလှောင်အိမ် ("မိယုတ်ဖယုတ်သားတို့ ပျော်စံရာ စီဘောက်") ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ရူးနေပြီလား။သွားစမ်းကွာ။ မင်း ရူးနေတာကို အရူးကုဆရာဝန်ဆီမှာ သွားကုစမ်းကွာ။ ဒီမှာ လာပြီး ရူးကြောင်မူးကြောင် စကားတွေနဲ့ ဖိန့်ဂွိန့်တွေ လုပ်မနေနဲ့။Nemesis
ရုရှမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး ကတော့ ဒီ Simple Views ဘလော့မှာ ဆဲဆိုတာကို အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီး လုပ်ပြီး တာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ နေ့စဉ် အစဉ်အလာမပျက် လာလာဆဲနေတာကိုး။
ညီမ sv ရေအောက်က စီပုံးကို ဖြုတ်လိုက်တာ သာဓုပါတော်
ပြည်တွင်းက ဖွတ် အသံ
ပြည်တွင်းက ဖွတ် အသံဆေးရုံဝင်းအတွင်း ဒေသခံများကို ကြံ့ဖွတ် နဲ့ ရဝတ အမိန့် ပေးမှူကြောင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေကလဲ အာဏာတပြပြနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်တွေက သူတို့ရဲ့ တူတွေ သားတွေရဲ့ ကျောင်းစိမ်းလုံချည်ကိုဝတ်ပြီး ဟန်ရေးပြနေကြတယ်။ "ဖွတ်" ပါဆိုမှ ဘယ်မှာ သွား အလုပ် ရှိပါ့မလဲနော်။ အလုပ်မရှိတော့ "အရမ်း မီးရှို့" လား၊ "ဖွတ်" ကောင်လား၊ "ရရင် ဝါး"တဲ့ ကောင်တွေလား ဒါတွေ လုပ်ချင်နေကြတာပေါ့.။ သူတို့ရဲ့ မိန်းမတွေကလဲ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရင် ပြီးရော နေကြတာပေါ့။ အရပ်ထဲမှာ ညည ပြန်လာရင် ရဲဆိုတဲ့ ငိုစားရီစားတွေ ရန်ကို ကြောက်ရတယ်။ အလုပ်ပြန်နောက်ကျတာ ကားက အောက်ဆိုက်ကား လူမရှိလို့ စောင့်တင်တာနဲ့ ပိုလို့မိုးချုပ်တော့ ရဲ ဆိုတဲ့ ကောင်တွေက "မသင်ကာမှူ၊" "မှောင်၇ိပ်ခိုမှူ" ဆိုပြီး အမှူတပ်ပြီး ဝါးကျော ဖွင့်တာ ကြောက်ခဲ့ရတယ်။ ကဲ၊ အခုတော့ ဖွတ်တွေက ဟောက်စား လုပ်ပြီး ရန်ရှာနေပြီ။ "ဆွဲစိလိုက်မယ်၊ ငါ့ကို ဘာကောင်ထင်လဲ" ဘာညာနဲ့ အရက်သမား၊ လူပေလူတေ၊ ၁၀၉-၁၁၀ တွေက ဟောက်စား လုပ်နေကြတာ။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ သူတို့ ပါဝါ ပြလေဘဲ။ ဒါနဲ့ ဆေးရုံဝင်းထဲ သန်ရှင်းရေး လုပ်ရတယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တယ် ဆိုတာကလည်း လူကြီးတွေ လာလို့ လုပ်ရတာပါဘဲ။ လူကြီးတွေလာတယ် ဆိုတော့ အခမ်းအနားပါ ပါတာပေါ့လေ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတဲ့ လူကြီးတွေ ရှေ့မှာ ဆိုတော့ ဖွတ်ကောင်တွေ က အင်အားပြချင်တာနဲ့ ပိတ်ပွဲမှာ "သဘာပတိကြီးတွေက လိုအပ်သည်များကို မှာစားသွားတယ်" ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ဖွတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးက မိန့်ခွန်းတွေ ဘာတွေ ချွေပြီး သူတို့ အဆုံးပိတ် အော်ဖို့ "ဒို့အရေး" အစား ဖွတ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ရဲ့ စကားကြောင့် အောက်က ဖွတ်အဖွဲ့သားတွေ နားလည်ခဲ့တာတော့ ဟောဒီ အတိုင်းပါ။ "ကဲ၊ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်ပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်ဆို။ ကဲ၊ အကျယ်ကြီး ၃ ခေါက် အော်ကြပါ" လို့ ပြောလိုက်ရော အောက်မှ ဖွတ် သား၊ မြေး၊ တီတွတ်တွေ အားရပါးရ အော်လိုက်ပုံ ကတော့ "အကျယ်ကြီး ..... အကျယ်ကြီး …. အကျယ်ကြီး" လို့ အားပါးတရ ၃ ခါ အော်လိုက်ပါတော့တယ်တဲ့။ပြည်တွင်းလှူပ်ရှား မြန်မာပြည်သား(ဖြစ်ရပ်မှန် ဟာသ၊ Mandalay Gazette)
19 October 2010 at 05:41
ဒီနေ.ဟာ ဆိုရင် လူသားအားလုံး မေးထားတဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြေဆိုရမယ့် ရက်စေ့ပါပြီ ...မည်သူမှ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိလို. ဒီပွဲမှာ လူသားအားလုံး က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိသွားပါတယ် ....simple views
ညီမရေ..ရေးထားတာလေး ကောင်းတယ်.. နောက် မန့်ထဲမှာ အညာသား လူလည် ရေးထားတာလေးကို စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ်နော်..။ မဗေဒါ (၈၈)
စက်မှု (၁) ၏ လိမ် (၄) လိမ် ဆောင်ပုဒ်
စက်မှု (၁) ၏ လိမ် (၄) လိမ် ဆောင်ပုဒ်နေပြည်တော် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းဌာနကြီး (၆) ခုမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများမှာ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း အလိုကျ လိမ်ပေးနေရသည့်အတွက် “လိမ် (၄) လိမ်” နှင့် အလုပ်လုပ်နေကြရသည်။(၁) ကုန်ပစ္စည်းများ မထုတ်ဘဲ အထုတ်ပြပြီး လိမ်နေရခြင်း၊(၂) မမြတ်ဘဲနှင့် မြတ်ပါသည်ဆိုပြီး လိမ်၍ အမြတ်ပြရခြင်း၊(၃) ဌာနငွေ မသုံးဘဲနှင့် သုံးပါသည်ဆိုပြီး လိမ်နေရခြင်း၊(၄) လက်ကျန်မရှိပါဘဲ ရှိပါသည်ဆိုပြီး လိမ်နေရခြင်း တို့ဖြစ်သည်ဟု စက်မှု (၁) စက်ရုံဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
အကြံပက်စက်တဲ့ နအဖဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြန်မာပြည်မှ ဗုံးခွဲတရားခံတွေထဲက တစ်ဦးကို ပဲခူးမြို့မှာ ဖမ်းမိပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/news.php?id=12484အဲဒီ ဗုံးခွဲတရားခံက ရန်ကုန်တိုင်း၊ တပ်မတော် စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ (စရဖ) (အရင်အခေါ် စစ်ထောက်လှမ်းရေး) က တပ်ကြပ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလို့ လူထု ကြောက်လန့်ပြီး အတိုက်အခံကို စွပ်စွဲခွင့်ရအောင် သောင်းကျန်းသူ တရားမဝင် စစ်အစိုးရက ကြံတာပါ။ဗုံးခွဲဖို့ အကြံ မအောင်မြင်ခင်မှာ မိသွားတော့ ကျော်ဆန်း နဲ့ ခင်ရီ တို့က ကေအင်ယူ နဲ့ နယ်စပ်က အတိုက်အခံတွေကို လိမ်ပြီး စွပ်စွဲမလို့ ပြင်ဆင်ထားတာတွေကို မလိမ်လိုက်ရပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။စစ်အစိုးရက ဒီလိုမျိုး လံကြုတ်ဇာတ်လမ်းတွေ ဆင်ပြီး ပြည်သူကို လိမ်လာတာ ၄၈ နှစ် ရှိပါပြီ။ သေရာပါမယ့် အကျင့်ဆိုးတွေက အရိုးစွဲနေပြီ။ တပ်မတော်အရာရှိ အချင်းချင်း စောင့်ကြည့်ပြီး အကျင့်ဆိုးများကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးကြဖို့ လိုပါပြီ။မဟုတ်ရင် အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲမှုများကို စီစဉ်နေတဲ့ သောင်းကျန်းသူ တရားမဝင် စစ်အစိုးရကြောင့် အုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး ပျက်ရတော့မယ်။
သို့ဘလော့ပိုင်ရှင် အရီလေးSVဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက် စာရင်းသွင်းခံရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေလည်း အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာ နေခွင့်မရအောင် လုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် အနုပညာရှင်တွေလည်း ဗီဇာ ပိတ်ခံခဲ့ရပြီ။ သခင်ကရင်တွေကလည်း DKBA ကို နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့အတွက်. . သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဆဲဆိုပြီး နှိပ်ကွပ်နေတာ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆပြီး . . . ထောက်လဲ ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ကျောသား ရင်သား ခွဲခြားတာတွေ မလုပ်သင့်ဘူး။ မေးချင်တာက နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု ဘယ်တော့ စတင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီစာရွက်မှာ ရှေနေကုလား သန်းတင်က ပလီတွေဆောက်ခွင့်နဲ့ အခွင့်ထူးတွေပေးရင် . . နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ ဗြောင်ကြီးကို စည်းရုံးထားတယ်။ ပလီဆောက်ခွင့်ရရင် ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံကြပါလို့ စည်းရုံး ပြောဆိုချက်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့လုံးဝကို မကိုက်ညီပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက. .. အိမ်ရှင်မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ကိစ္စဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကောက်ကျစ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တောင်ဥက္ကလာပ မှာလဲ ပလီဆောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့လို့ အခုဆိုရင် ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက ကူညီနေကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကြီးဆိုးနိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံပါဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ပြောနေကြပြီ။ ခင်ဗျားတို့က ဦးခင်မောင်ဆွေလို တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့သူကို နအဖ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံတဲ့အတွက် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက အားကျိုးမာန်တက် နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံနေတာကို ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့ ပါးစပ်တွေ ပိတ်နေတာလဲ? ကုလားကိုကြောက်ပြီး .. . မြန်မာအချင်းချင်းပဲ ရန်ဖြစ်ရဲတဲ့ အိမ်ကျယ်စိတ်ဓါတ်ကို မြင်တွေ့နေရတာလား? ဒီမိုဘက်တော်သားပါလို့ ပြောနေတဲ့ ကုလားတွေကလည်း ကုလားအချင်းချင်းဆိုတော့ မသိဟန်ဆောင်နေပြီ။မြန်မာတွေကိုပဲ အရေးယူတယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေပြီး ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက ဘယ်လို မြင်လာမလဲဆိုတာ နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါ။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးကြပါ။ ဒီမိုဘလော့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တွေလဲ . . နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချမှုကို စတင်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။ မြင့်မြတ်သည့်မြေမှာ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရမြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ ထောင် ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၁)
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ ထောင် ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၁)ဦးအောင်သိန်းလင်းက ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် ခုတုံးလုပ်ပြီး ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်အောင် ဘာကြောင့်များ မီးမွှေးလိုက်ပါလိမ့်။အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရေး သူ့မိသားစုရဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာအတွက်ပါ။ဒီလို မြို့တော်ဝန်ကြီးကို မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်သူ မြို့တော်သားတွေက ဘယ်လို အားကိုးယုံကြည်ကြရမလဲ။ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ ထောင် ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၁)အဖြေထွက်ပြီးသား ပုစ္ဆာကြီး (၁)နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲကတော့ နီးကပ်လာပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကြီး နီးလာပေမဲ့ ပြည်သူအများစုကတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးနဲ့ ခပ်ခွာခွာ နေကြတယ်။ မဲပေးရတော့မယ်ဟဲ့ ဆိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်နေသူမျိုးလည်း မတွေ့မိသလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထင်တလုံးနဲ့ ၀င်ပြိုင်ကြမယ့်ပါတီတွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒ နယ်မြေတွေမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်နေကြပါပြီ။ အဲဒီလို မဲဆွယ်စည်းရုံးကြတဲ့အခါ ကိုယ့်ပါတီ မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေချပြ၊ ရှင်းလင်း ပြီး ကိုယ့်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲပေးအောင် ကြိုးစားကြတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဆို ဘာမှ သိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အဲသလိုမဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ အာဏာပါဝါနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အသုံးချပြီး မဲရရှိရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိရေး ကြိုးစားနေကြတာတွေကတော့ တိုင်းပြည်ရှေ့ရေးအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ ၀န်ကြီး၊ ၀န်ကလေး၊ မြို့တော်ဝန်တွေပါဝင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပေါ့။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်နဲ့ အဆောက်အဦးတွေတင် သုံးလို့ အားမရနိုင်ကြသေးဘူး။ လက်ရှိကိုင်ထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တလွဲသုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရေးကို အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ ဆောင်ရွက်နေ ကြပြန်တယ်။ အဖြစ်အပျက်များစွာထဲက တခုလောက်ကို ဥပမာပေး တင်ပြရရင်ကို လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ဝဝဝ ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၂)
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ဝဝဝ ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၂)အဖြေထွက်ပြီးသား ပုစ္ဆာကြီး (၂)အဖြစ်က ဒီလိုပါ။ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၇ ရပ်ကွက်၊ သစ္စာလမ်းမကြီးပေါ်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗလီတခုရှိပါတယ်။ အဲဒီဗလီကို ပြုပြင် တည်ဆောက်လိုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဟော…အခုတော့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံမယ့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းတဖြစ်လဲ ဦးအောင်သိန်းလင်းက အဲဒီသစ္စာလမ်းပေါ်က ဗလီကြီးကို ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုလိုက်ပါပြီ။ အပေးအယူ သဘောနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် ၂ ထောင် စုပေးရမယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို မဲပေးရ မယ်။ အဲဒီလို သဘောတူညီချက်နဲ့ ဗလီပြင်ဆင်ခွင့် ချပေးလိုက်တယ်။မြို့တော်ဝန်ကြီးဟာ ဘာမှ ချင့်ချိန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူအနိုင်ရရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပုံပါပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာကိုလည်း ဘေးချိတ်ထားလိုက်ဟန်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို နိုင်ငံရေး ပါတီများ ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များမှ ဟောပြောတင်ပြခွင့်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အပိုဒ် (၆)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) မှာ - “ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း” မပြုလုပ်ရလို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားထားတာ တွေ့ရလို့ပါ။ဒါ့အပြင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေများရဲ့ အပိုဒ် (၁၅)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) မှာ - “လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူအများနှင့်ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ရေးသားမှု၊ ဟောပြောမှု သို့မဟုတ် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ပြုလုပ်ခြင်း” မပြုလုပ်ရလို့ တရားဝင် တားမြစ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ဝဝဝ ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၃)
ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး မွတ်စလင်မဲ ၂ဝဝဝ ဝယ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ အရှက်မရှိ လုပ်ရပ် (၃)အဖြေထွက်ပြီးသား ပုစ္ဆာကြီး (၃)အဲဒီလို ထုတ်ပြန်ကြေညာတားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြို့တော်ဝန်ကြီးကို မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်သူ မြို့တော်သားတွေက ဘယ်လို အားကိုးယုံကြည်ကြရမလဲဆိုတာ မြို့တော်ဝန်ကြီး စဉ်းစားမိပါရဲ့လား။ မြို့တော်ဝန်ကြီး ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် ခုတုံးလုပ် လိုက်တာပါပဲ။ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုတာ အင်မတန်အကဲဆတ်၊ အန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို ဘာ့ကြောင့် အဆင်ခြင်ကင်းမဲ့စွာ လုပ်တာပါလိမ့်။တည်ငြိမ်နေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုက်အ၀န်းလေးတခုကို ဟန်ချက်ပျက်အောင်၊ သဘောထားကွဲလွဲ၊ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင် ဘာကြောင့်များ မီးမွှေးလိုက်ပါလိမ့်။အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရေးပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရချင်တာဟာလည်း သူ့ရာထူးဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ပါ။ သူ့မိသားစုရဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာအတွက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူ့လုပ်ရပ်တွေက ရှင်းလင်းစွာ သက်သေပြနေတယ် မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေက နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲဟာ “လုပ်ပွဲ” ကြီး၊ အဖြေထွက်ပြီးသား ပုစ္ဆာကြီးဆိုတာသိလို့ ခပ်ခွာခွာ နေကြတာပါ။ ဓားခုတ်ရာ လက်ဝင် မလျှိုလိုကြပါဘူး။ သုမဏကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆိုသလိုပါပဲ။ ပြည်သူတွေက ခံရပေါင်းများနေတော့ သိနေတယ်လေ…လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။VOA
20 October 2010 at 21:56
၂၀၀၈ က နအဖ က လိမ်ပြီးတစ်မျိုး၊ ခြိမ်းခြောက်ပြီးတစ်ဖုံ အဓမ္မ မဲယူသွားပုံ၂၀၀၈ က ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နာဂစ် တိုက်အပြီး အိမ်တွေပျက်၊ ဒုက္ခရောက်နေလို. တစ်ပြည်လုံးက နာဂစ်သတင်းကို အာရုံစိုက်နေစဉ် နအဖ က ပွဲလန်.ဖျာခင်းပြီး လိမ်ပြီးတစ်မျိုး၊ ခြိမ်းခြောက်ပြီးတစ်ဖုံ အဓမ္မ မဲယူသွားတဲ့ ဥပမာတွေပါ။နာဂစ်တိုက်ပြီး ကစင့်ကလျားဖြစ်နေစဉ် အသက် ၈၀ ကျော် ကျနော့ ယောက္ခမအိမ်ကို ရယက ၈ ဦးလာပြီး "ကြိုတင်မဲပေးပါ" ဆိုပြီး အိမ်သားအားလုံးအတွက် အတင်း ထောက်ခံမဲ ယူသွားတယ်။ ကျနော်တို.လဲ အိမ်မှာ မရှိတော့ မသိလိုက်ဖူး။(ဗဟန်းမြို.နယ်က မိသားစုဝင်တစ်ဦး)အန်တီက ခင်ပွန်းနေမကောင်းလို့စင်ကာပူက သမီးထံ ဆေးကုသွားခါနီး ရပ်ကွက်လူကြီးတွေက "ကြိုတင်မဲပေးသွားပါ" ဆိုတော့ ခရီးသွားခါနီး နှောင့်ယှက်ခံရမှာ ကြောက်လို. သူတို. လိုခြင်တဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။(မင်္ဂလာတောင်ညွန်.က အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး)သမီးတို.ရုံးမှာ တာဝန်ရှိဌာနမှူးက "၀န်ထမ်းတွေ အားလုံး အမှန်ခြစ်ရမယ်၊ ပြောတဲ့အတိုင်း မလုပ်ရင် မလုပ်သူကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး လူပုံအလည်မှာ ပြန်ပြင်ခိုင်းမယ်၊ အထက်ကို သတင်းပို.မယ်"လို. ပြောတော့ ကြောက်တာပေါ့နော်။(သတ္ဘုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး)ကျနော်တို.ရွာမှာ ရွာလူကြီးတွေက "စစ်အစိုးရကို မကြိုက်ရင် အမှန်ခြစ်ပါ၊ အမှန်မခြစ်ရင် စစ်ဗိုလ်တွေပဲ ဆက်အုပ်ချုပ်မယ်" လို.သတင်းဖြန်.တယ်။ ရွာသားတွေက စစ်အစိုးရကို ရွံမုန်းနေတော့ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်တာပေါ့။(ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းလွယ် အနီး ရွာတစ်ရွာမှ ပြည်သူတစ်ဦး) ဆက်လုပ်စါးကြမယ်ဟေ့
ဖွတ်တွေကို မဲမပေးရင် ဖမ်းမယ်တဲ့
ဖွတ်တွေကို မဲမပေးရင် ဖမ်းမယ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးလျှင် ဖမ်းဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်နေ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမပေးလျှင် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးမည်ဟု ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးက ပြောဆိုသည့်အတွက် ဒေသခံရွာသားများ အခက်ခဲကြုံနေရသည်။ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ် ခေတ်ဆန်းကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး ဌေးဦးက ရန်ကုန်တွင် အလုပ်သွား လုပ်ကိုင်နေသည့် လူငယ်များ၏ မိဘများကို ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွာသားတဦးက ပြောသည်။“ရွာသားတွေကို မင်းတို့ ဘယ်မှ မသွားနဲ့ မဲထည့်ရမယ်၊ မထည့်ရင် ဖမ်းဆီးထောင်ချမယ် ပြောတယ်၊ ရွာက ကလေးတွေက ရန်ကုန်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတာ အဲဒါကို ပြန်လာခဲ့ မဲလာထည့်ရမယ်၊ ကြိုတင်မဲထည့်ရမယ်၊ မထည့်ရင် ဖမ်းမယ် အဖေကို ပြောတော့ အဖေက ကလေးတွေကို ပြန်ခေါ်နေရတာပေါ့၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ထည့်ခိုင်းတယ်၊ ဒီမှာက ကြံ့ဖွံ့တခုဘဲ အဲလို ခြိမ်းခြောက်လိုက်၊ မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးမယ် မြူဆွယ်လိုက် လုပ်တာ” ဟုပြောသည်။ယင်းကဲ့သို့ မဲထည့်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်လုပ်နေသည့် လူငယ်များမှာ အလုပ်လက်မဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းရွာသားက ဆက်ပြောသည်။“ကောင်လေးတွေက စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ၊ တရက်မှ ပျက်လို့မရဘူး၊ နေ့တိုင်းအလုပ်ဆင်းနေရတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကလေးတွေက တောပြန်ရင် အလုပ်က ပြုတ်ဦးမယ်” ဟုပြောသည်။ထိုကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်မှာ ခေတ်ဆန်းကျေးရွာ တရွာတည်းမဟုတ်ဘဲ ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သာဖြန်၊ ဂရမ်းဒိုင်နယ်၊ သဇင်ကုန်းဒိုင်နယ်များမှ ဒေသခံများကြုံတွေ့နေရကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ဘိုကလေးမြို့ပေါ်တွင်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ဝန်ကြီးတဦးက ၎င်းအားထောက်ခံမဲပေးရန်အတွက် ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ ဆွမ်းကုန်ကျစရိတ်လှူဒါန်းမည်ဟု ပြောပြီး ယနေ့အထိ ငွေကြေးရရှိခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဆွမ်းလောင်းလှူရန် အခက်ခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဘိုကလေးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။“ဓမ္မာရုံဆွမ်းလောင်းအသင်းကို ငွေလေးလစာ တာဝန်ယူမယ် သိန်း (၁၂၀) ပေ့ါ၊ ဆွမ်းလောင်းအသင်း ဂေါပက လူကြီးတွေက အဲဒီကြံ့ဖွံ့ပါတီဝန်ကြီးက လေးလစာတာဝန်ယူလှူတယ်ဆိုပြီး မိုက်ကြီးနဲ့ လိုက်အော်တယ်၊ တကယ်တမ်းငွေလဲ မကျလာဘူး၊ တကယ်တမ်းငွေမကျတော့ ဆွမ်းလောင်းဖို့အခက်ခဲတွေ ဖြစ်နေတာ” ဟုပြောသည်။စစ်အစိုးရဝန်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့် ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီသည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေလျှက်ရှိသည်။(yoma3)
ဖွတ်ကြီးတွေကို ချီလီက မိုင်းတွင်း အပြိုကြီးထဲ ထဲ့ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား (အပိုင်း - ၁)
ဖွတ်ကြီးတွေကို ချီလီက မိုင်းတွင်း အပြိုကြီးထဲ ထဲ့ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား (အပိုင်း - ၁)ပေါတာကြီးတို့ ငရဲ မြန်မြန်ရောက်တဲ့နည်း (အပိုင်း - ၁)“ဖွတ်ချက်...ဖွတ်ချက်... ဒုတ်..ဒုတ်..ဒုတ်..ဒုတ်” ထော်လာဂျီသံ တညံညံကြားမှ... ဝေလေလေ အော်သံတွေ ကြွက်စီကြွက်စီ ကြားနေရလို့ စပ်စုဖို့ အိမ်ရှေ့ ထွက်ခဲ့တယ်.....။ ထော်လာဂျီ၂စီးနဲ့ လူတသိုက်ကို ကြည့်ရင်း ...ဘယ်ရွာနဲ့ဘယ်ရွာ ဘောလုံး ချိန်းကန်ကြပါလိမ့် လို့ တွေးနေတုန်း ....တူတော်မောင် သာဂိ.... မျက်နှာမသာမယာနဲ့ လူကြားထဲက ထွက်လာတယ်.....။ ပါးစပ်ကလည်း ....“အမလေးဗျာ....စားလောက်.. သောက်လောက်....။ ဖွတ်ပါတီက မဲဆွယ်တာကလည်း .... လူတယောက်ကို ဆန်တပြည်နဲ့ ဖွတ်ပါတီ တံဆိပ် ရိုက်ထားတဲ့ စွပ်ကျယ် ၁ ထည် တဲ့။ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဘုံးထားတာမှ အားမနာ...”“သြော်...အဲဒါ.. ဖွတ်ကောင်တွေ မဲဆွယ်နေတာလား ..။ အေးလေ... ဦးနုခေတ်တုန်းက မဲဆွယ်သလို လူတကိုယ် ကားတစီး ... တိုက်တလုံးဆို.. ဟုတ်သေး”“အဲဒါဘဲပေါ့...ဂျီးဒေါ်။ ဖွတ်ပါတီက တနပ်စား ..ကြံတယ် ဆိုတာ..။ ဆန်တပြည် ဆိုတော့...တနပ်ပဲ စားကြပေါ့”“နေဦး ...သာဂိ။ မျက်နှာလည်း ..မကောင်းပါလား ...ငါ့တူ”“စိတ်မကောင်းလို့... ဂျီးဒေါ်ရေ... စိတ်မကောင်းလို့..”“ဒုက္ခော...ဘယ်လိုဖြစ်လို့... စိတ်မကောင်းရသတုံး”“စိတ် လုံးဝ မကောင်းဘူး ...ဂျီးဒေါ်..။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စီအန်အန်သတင်းဌာနက လွှင့်တဲ့ ချီလီ မိုင်းလုပ်သား (၃၃) ယောက်ကို ကယ်ဆယ်တဲ့ သတင်းတွေ ကြည့်ပြီး ... စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတာ..ဗျ”“ဆိုပါဦး ..ငါ့တူ”အပိုင်း (၂) တွင် ဆက်ဖတ်ရန် >>>>>
ဖွတ်ကြီးတွေကို ချီလီက မိုင်းတွင်း အပြိုကြီးထဲ ထဲ့ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား (အပိုင်း - ၂)
ဖွတ်ကြီးတွေကို ချီလီက မိုင်းတွင်း အပြိုကြီးထဲ ထဲ့ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား (အပိုင်း - ၂)ပေါတာကြီးတို့ ငရဲ မြန်မြန်ရောက်တဲ့နည်း (အပိုင်း - ၂)“ချီလီသမတကြီးကလည်းဗျာ...တကယ် တော်တယ်...။ သူ့ပြည်သူတွေကို ဂရုစိုက်ပုံများ ..။ ကယ်ဆယ်ရေး တချိန်လုံးလည်း အနီးကပ်... အားပေးနေတာများ။ လူသား ဆန်လိုက်တာ...။ မြန်မာပြည်က ပေါတာကြီးနဲ့များ ကွာပါ့...ကွာပါ့”“ဟဲ့... ချီလီသမတကြီးက....ပြည်သူတွေနဲ့ အနီးကပ်နေတယ်။ ဟုတ်လား ...။ ကြား ....ကြားဖူးပေါင်..။ ရွေးကောက်ပွဲများ နီးလို့...မဲဆွယ်နေတာများလား ..”“ဟာ..ဂျီးဒေါ်ကလည်း ....။ ကျနော်တို့ဆီက ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ့် အာဏာရ ၀န်ကြီးတွေများ မှတ်နေလို့လား ...”“သိပါဘူးဟယ်....။ တို့ဆီက အကြီးအကဲကြီးတွေ ဆိုရင်.. သူတို့ လာတဲ့လမ်းက လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေဆို...ဆိုင်တွေ ရွေ့...။ လမ်းတွေ...ပိတ်ထား ...။ လုံခြုံရေးတွေ ချထား ....။ ယင်ကောင်တောင်.... လမ်း ဖြတ်မပျံရဘူး ...။ သူတို့ သမတကြီးတွေများ .... ပေါ့ဆလိုက်တာ...။ လုံခြုံရေးသတိကို မရှိဘူးနော်....။ တို့.... ပေါတာကြီးလို ထီးတော်မိုးတွေဘာတွေ မပါဘူးလား ...”“တော်ပါ ဂျီးဒေါ်ရာ... ဒီ ပေါတာကြီး ပေါတာလေးတွေကို...။ ချီလီ မိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးကတော့... သတင်းထောက်တွေကိုလည်း သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ ပေးထားတာ...။ ဒီသတင်းကို.... တကမ္ဘာလုံးက.... စိတ်ဝင်တစားကို စောင့်ကြည့်နေလို့ ရတယ်..ဗျ.”“ဟယ်.... အကုန် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားတယ်..။ ဟုတ်လား ...။ သူ မဟုတ်တာတွေ..... လုပ်ထားတာတွေ ပေါ်ကုန်မှဖြင့်ကွယ်...”“ထပ်သရီး ... ဂျီးဒေါ်..။ သတင်း အမှောင်ချထားတယ် ဆိုတာ....မဟုတ်တာ လုပ်တတ်တဲ့.... အာဏာရှင်တွေမှ လုပ်တာဗျ..။ ခုဆို....ချီလီ သမတကြီးနဲ့ တဖွဲ့လုံး ..။ ချီလီ တနိုင်ငံလုံး .... ပိုတောင် သိက္ခာ တက်သွားသေးတယ်...”“ဟေ....ဟုတ်လား”“နောက်ပြီး ... နိုင်ငံတကာက ပေးတဲ့ အကူအညီ အကြံဥာဏ်တွေကိုလည်း ...လက်ခံတယ်။ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကူညီ ကယ်ဆယ်လိုက်ကြတာ...။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကို.... လူသားတွေက အနိုင် ရလိုက်တဲ့...ပြယုဂ်ပဲ.. ဂျီးဒေါ်”“အင်း ..နော်.. တို့ဆီမှာတော့ လူတွေ ဖောက်ချင်တိုင်း ဖောက်ထားတဲ့ ဆည်တွေက... မိုးကြီး လွန်းရင် ဖောက်ချကြ။ ရေတွေ ကြီးကြ...။ လူတွေ... သေကြ..။ ဒုက္ခတွေ...ရောက်ကြ..”“ဂျီးဒေါ်ရယ်... နာဂစ်တုံးကလည်း ... နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေက ကမ်းလှမ်းနေတာကိုလည်း ကာဆီး ...ကာဆီး ..။ ဖြတ်စား လတ်စား ..လုပ်။ ကိုယ့်ပြည်သူ အချင်းချင်း ကူညီသူတွေကျတော့လည်း ... ဖမ်းဆီး ထောင်နှစ်ရှည်တွေချ..။ အဲဒါတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လိုက်တိုင်း ... ကျနော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရလေပဲဗျာ။ ကိုယ့်တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ ဒီလောက် ဒုက္ခ ပင်လယ် ဝေနေတဲ့ ကြားထဲက.... ၀မ်းနဲကြောင်း ပြဖို့... နေနေသာသာ..။ နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံကြီး ...အတင်း အတည်ပြုသွားသေးတယ်...”“အမယ်...တို့အစိုးရမင်းများလည်း ... နာဂစ်တုံးက ၀မ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းအမှတ် လုပ်သွားပါသေးတယ်..”“အမလေး ...ဂျီးဒေါ်..။ နာဂစ်အပြီး ...တရုပ် ငလျင်ဘေးမှာ သူတို့ ဆရာ ၀မ်ကျားသစ်ပေါင်တို့ လုပ်တာ အတု ခိုးပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၁လလောက် အကြာမှာမှ...ရုတ်တရက်ကြီး ထပြီး ...ဥသြတွေ ဆွဲလိုက်တာလေ..။ ဂျီးဒေါ်တို့တောင်... မီးလောင်တာ မှတ်လို့... အထုပ် အပိုးတွေ ဆွဲပြီး ... ပြေးကြသေးတယ်လေ... ဟီး ..ဟီး”“အေးပါဟယ်...။ အဲဒီ အာဏာရှင်တွေ...လုပ်လိုက်ရင်.... တလွဲချည်းဘဲ...။ သူတို့ အကုသိုလ်နဲ့ သူတို့ ငရဲ ရောက်မှာပါ...”“ရောက်စမ်းပါစေဗျာ... မြန်မြန်လေး ..။ အော်...ဂျီးဒေါ်... သူတို့ ငရဲ မြန်မြန်ရောက်အောင်... ချီလီက မိုင်းတွင်း အပြိုကြီးထဲ ထဲ့ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား ......ဟီး ..ဟီး”“အေး ..အေး ... ကောင်းတယ်..။ ချီလီ သမတကြီးနဲ့တွေ့ရင် ပြောလိုက်စမ်းပါ...” (ဤတွင်....တခန်းရပ်)[ဂျော်ဒီး - မိုးမခ၊ သရော်စာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊၂၀၁၀]
ချီလီသမတ နဲ့ ချီးဘူးသန်းရွှေ
ချီလီသမတ နဲ့ ချီးဘူးသန်းရွှေ(ဟန်လေး ကာတွန်း)http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/cartoon/7-cartoon/4306-2010-10-15-11-27-20
အထွေထွေသပိတ် တိုက်ပွဲကြီး ၂၃၊ ၁ဝ၊ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဆင်နွှဲမည်
အထွေထွေသပိတ် တိုက်ပွဲကြီး ၂၃၊ ၁ဝ၊ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဆင်နွှဲမည်၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ လာမည့်စနေနေ့၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (၂၃၊ ၁ဝ၊ ၁ဝ ရက်နေ့) တွင် တိုင်းတခွင်လုံး၌ အထွေထွေသပိတ်ကြီး ဆင်နွဲမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေ သပိတ်ကော်မတီမှ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်သည်။ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမမျှတလို့ပါ၊ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း မကြိုက်လို့ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးလည်း လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ၊ ဒါကို ပြည်သူလူထုကလည်း သိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို တက်ညီလက်ညီနဲ့ သပိတ်မှောက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေသပိတ် ကော်မတီဝင်တဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီအား ယခုလ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်ရှိ တိုင်း (၆) တိုင်း၊ ပြည်နယ် (၄) ခုတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း (၂၁) ဦးတို့က ဦးဆောင်ကာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထွေထွေ သပိတ်ကော်မတီကို ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ စိတ်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ဌာ ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းများကတည်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး စာများ ဖြန့်ဝေကာ လူထုကို စည်းရုံးထားကြောင်းလည်း အဆိုပါ သပိတ်ကော်မတီဝင် တဦးက ပြောသည်။ ပြည်သူလူထုပါဝင် ဆင်နွှဲလာမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြောင်း ၎င်းက “ဟုက်ကဲ့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ မတရား လိမ်နေတာကို သိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ၊ ဒီတခါဆိုတာ ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက် နောက်ဆုံးအချိန် ဖြစ်လို့ပါ။ ပြည်သူတွေပါမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်မည့် အခြေအနေများနှင့် ရပ်တည်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ၎င်းက “ကျနော်တို့ကတော့ မထူးတော့ဘူးလေဗျာ။ ပြည်သူတွေမှာက သေမထူး နေမထူး ဖြစ်နေပြီလေ။ ဒီအတိုင်း ခေါင်းငုံ့ခံနေရင် ကျနော်တို့ ဘ၀တွေဟာ သွားပြီလေဗျာ။ စစ်ဖိနပ်အောက် ပြားပြားမှောက်နေရတော့မှာလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေဟာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြမှာပါ” ဟု ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေ သပိတ်ကော်မတီအနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အကွက်ကျကျ စီစဉ်ထားကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေနှင့် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပါဝင်အားဖြည့်ကြရန်လည်း ပြည်သူများအား ပြန်ကြားကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ယုံကြည်ချက်ကို ဦးတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အောင်ကို အောင်မြင်မှာပါ၊ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင် ရောက်ကိုရောက်မှာပါ” ဟုလည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေသပိတ် ကော်မတီဝင်တဦးက ပြောကြားသွားသည်။ ( မြတ်ခိုင်ဦး - NEJ )
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ တဘောင်များ
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ တဘောင်များသန်းရွှေတန်ခိုး၊ ပဲခူးမှာ ဆုံး၊ ပြည်လုံးကြွလတံ့။သောကြာကြယ်ကြီး၊ လနဲ့နီး၊ ပြည်ကြီး ပျက်လတံ့။ကြယ်ကို လဖောက်၊ ထီးနန်းပျောက်လတံ့။
"ဘယ်မီဒီယာမှ မမြင်စေနဲ့၊ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ မမြင်စေနဲ့"http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/cartoon/7-cartoon/4333-2010-10-19-10-34-51ကလိမ်ကကျစ် သန်းရွှေ
ဟဟဟသို့ဧရာဝတီက သွားပုတ်လေလွင့် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ဧရာဝတီ မလိမ်ပါ။ပြည်သူကို လိမ်ခဲ့တာ၊ လိမ်လာတာ၊ လိမ်ဦးမှာက စစ်အစိုးရပါ။စာအိတ်ကို ကော်ကပ်ကပ်၊ မကပ်ကပ် နအဖက မဲလိမ်မှာပါ။
@ဟဟဟဧရာဝတီ ဆိုတာ နာမည်တလုံးနဲ့ နေတဲ့ သတင်းဌာနကွ ....သူ့မှာလည်း ခိုင်လုံတဲ့ source တွေရှိလို့ သတင်းထုတ်ပြန်တာပေါ့။မင်းတို့ ဘကြီး နအဖ ဘက်ကသာ ရိုးသားမယ်ဆိုရင် မင်းတောင် ဒီလို လာပြောနေစရာ မလိုဘူး
"ဧရာဝတီ ဆိုတာ နာမည်တလုံးနဲ့ နေတဲ့ သတင်းဌာနကွ .... သူ့မှာလည်း ခိုင်လုံတဲ့ source တွေရှိလို့ သတင်းထုတ်ပြန်တာပေါ့။ မင်းတို့ ဘကြီး နအဖ ဘက်ကသာ ရိုးသားမယ်ဆိုရင် မင်းတောင် ဒီလို လာပြောနေစရာ မလိုဘူး"လို့ ဧ၇ာဝတီဘက်သား ပြောတာ အ၇မ်း သဘာဝကျပါတယ် ....
`ဧရာဝတီ´ ရေးထားတာကြိုက်တယ်ကွာ...... မဲထည့်ထားတဲ့စာအိတ်ကို ကော်ကပ်ပီးပိတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မပိတ်သည်ဖြစ်စေ အမှန်အကန်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ........
တုတ်ကြီးခွေးသူတောင်းစားလေး.. မမိုက်ရိုင်းနဲ့။မျက်ခွက် ဖြတ်ကန်ခံရမယ်။
ခွေးက လူပြန် ဟစ်နေပါလား
ခွေးမသား ခွေး တုတ်ကြီး က "ဒီမို ခွေးတွေ" လို့ ပြောနေပါလား"ဒီမို ခွေးတွေ" .......... တဲ့ဟုတ်လား၊ ခွေးမသား တုတ်ကြီး ?သူခိုးက လူပြန် ဟစ်နေပါလားခွေးက လူပြန် ဟစ်နေပါလား
ရုရှက ပညာတော်သင် ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ် Tote Kyi ကတော့ အဆဲအဆို မပါပဲ စကား မပြောတတ်ဘူး
သူ့ထက် သာတာ မရှိတော့ဘူးလား
ီSimple Views ဘလော့မှာ နေ့တိုင်းလိုလို လာလာပြီး အောက်တန်းကျကျ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ကလော်တုတ်နေတဲ့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ၊ ပေါက်လွတ်ပဲစား၊ ဆန်ကုန်မြေလေး၊ ရေမျောကမ်းတင်၊ ကလေကချေ၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် တုတ်ကြီးလို အကောင်ကို ရုရှားမှာ ပညာတော်သင် လွှတ်ထားတယ် ဆိုတော့ စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ ပညာတော်သင် လွှတ်ထိုက်တဲ့၊ တုတ်ကြီးထက် သာတဲ့ စစ်ဗိုလ် မရှိတော့ဘူးလား
တုတ်ကြီးကြောင့် နိုင်ငံတော်ကြီး(သောက်ရူးငသန်းရွှေ)လည်း တော်တော်သိက္ခာကျနေပြီ
ဟဟဟ ရေ...အသံကောင်း လာမဟစ်နဲ. ...ရှင် တ နေတဲ့ တုတ်ကြီး ဆဲတုန်းက ရှင် ဆွံ.အနားမကြားကျောင်းများ ရောက်နေသလား..... လို.ပဲ မေးချင်တယ်တုတ်ကြီးကို တော်တော် တမ်းတနေတယ်....ပါးစပ်ဖျားကကို မချဘူး... ရောပါသွားတော့မယ်simple views
ငဟသိပ်မရွှီးနဲ့ ကွ။ ဖောချင်ရင်လဲ ယုတ္တိရှိရှိ ဖော။တစ်ခါ ဖော ၂ ခါဖော နဲ့၃ ခါဖောရင် သေတတ်တယ်နော်သေချင် ဆက်သာဖော ငဟ ရေမသိရင်ခက်မယ်။ စိတ်လေတယ်..vi848
ကိုငဘသို့(တုတ်ကြီးက ဟဟဟ တို့နဲ့ တစ်ကျောင်းတည်းလား။ ဒီမောင်က ဘာလို့များ အဲလောက် ဇာတိမန်ပြ ယဉ်ကျေးမှုလက်မှတ် ပြနေရတာတုံး) .......................... လို့ ကိုငဘ က မေးထားတယ်။ကိုငဘ သိချင်တာကို ကိုမီးဒုတ် ပြောထားတာ အောက်မှာ copy ပြန် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မီးဒုတ်: အဲဒီ လဒ တုတ်ကြီး က Kaluga မှာရှိတဲ့ Bauman Moscow State Technical University ရဲ့ ကျောင်းခွဲမှာ တက်နေတာ။ အဆောင်က Baumanskayar လမ်းပေါ်မှာပဲ။ ပဉ္စမထပ်မှာ နေတယ်။မီးဒုတ်: လေယာဉ်စီးပြီး ပါးသာ သွားရိုက်ချေ။ ဒီအတိုင်း ban မယ် ဆိုလည်း ဖြစ်သားပဲ။ လဒ တုတ်ကြီး က တခြား သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ LAN ကြိုးတွေ ပြောင်းချိတ်ပြီး သုံးနေတာနဲ့ တူတယ်။
အခုချိန်မှာ အခင်းအကျင်းတွေက အတော် သိသာနေပါပြီနှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်မှ ရွေးကောက်ပွဲ တခါ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံက "အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိလို့" ဆိုပဲ။"ဘယ် foreign monitoring မှ မလိုဘူး မလာနဲ့" ဆိုပဲ။မဲရုံနားမှာ ဓါတ်ပုံတောင် ရိုက်ခွင့်မပေး။ မဲခိုးနေတဲ့ သဲလွန်စ ဘယ်လို မှတ်တမ်းတင်ရပါ့။အဟဲ NDF တို့ ဦးသုဝေတို့ကိုတော့ သနားပါတယ်ဟိုကတော့ ပြည်နယ် တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်တွေတောင် လျာထားပြီးပြီ
"နိုင်ငံတကာရောက်နေသူတွေ အကုန်ပေးတယ်" တော့ မပြောနဲ့ ဟဟဟရေ.အဲဒါ ကိုယ်တိုင် သက်သေပြလို့ ရတယ်။ကိုယ်ဘာကောင်လဲ ဆိုတာ သံရုံးကို အမြဲဝင်ထွက်နေတဲ့အတွက် သူတို့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြားစာတော့ မပို့ဘူးကွ။၀န်ထမ်းနဲ့ နီးစပ်ရာ ရောက်ခါစ ကျောင်းလာတက်တဲ့ သူတို့အသိုင်းဝိုင်းထဲက ချာတိတ်တွေနဲ့ အခြားသံရုံးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေဆီပဲ ပို့တယ်။လူအယောက် ၅သောင်းအထက် ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူတရာတောင် မပြည့်ဘူး
ငဟကံမကောင်းစွာပဲ ခင်ဗျား အဲဒီမှာ ကွိပါတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆီကို ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ စာမလာဘူး ဘယ်သူမှလဲ မမေးရဲဘူး။သိပ်မရွှီးနဲ့ ကွ ငဟ။vi848
ဟဟဟမင်းရေးတဲ့အထဲ မလိုပဲ ခနော်ခနဲ့တွေ ထည့်မရေးနဲ့။ မျက်စိနောက်တယ်။မြန်မာပြည်မှာ နယ်မြေအလိုက်ပေးရပေမယ့် နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေကျ နယ်မြေအလိုက တကယ်ပေးရမပေးရ မသေချာလို့ပါ။ကိုယ့်လူပြောပုံအရဆို တကယ်မြန်မာပြည်က နယ်မြေအလိုက်ပေးရတဲ့သဘောပေါ့။ငါ့အသိတွေက မြန်မာပြည်က တကယ့်နယ်မြေအတိုင်း ပေးရတာ မဟုတ်ပဲ ပါတီသုံးခုပဲ နာမည်ရေးထားပြီး ကိုယ်စားလှယ်နာမည်လဲ မပါတဲ့ဟာကို ပေးခဲ့ရတယ် ပြောလို့ confirm လုပ်ကြည့်တာပါ။မယုံမကြည်နဲ့ မင်းကို ပညာစမ်းနေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။အခု မင်းနဲ့ကြုံနေလို့ မင်းကိုပဲ မေးလိုက်တာ။အခြားမင်းတို့ဆိကလူတွေကို တကူးတက လှမ်းမေးလဲ ရပါတယ်။စင်ကာပူမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား တရားဝင် နေတာ သိန်းချီ ရှိတယ်။အဲဒီထဲမှာ မင်းသူငယ်ချင်း လက်နှစ်ဖက်မက ရှိလိမ့်မယ်။မေးကြည့်ပေါ့ကွာ မြန်မာနိုင်ငံက ဥပဒေအတိုင်း သူတို့ မဲပေးခွင့်ရသလားဆိုတာ။
ဇော် မျိုးမေးတဲ့ မေးခွန်း ဖြေ ကြ လေကွာ....ဘာပါး စပ် ပိတ် နေ ကြတာလည်း ....
ဟဟဟမင်းနှယ် "သတင်းမှားတယ်" ဆိုတာ မဲမပေးရပါပဲ "မဲတွေ ပေးရပါပြီ" ဆိုပြီး ပြောတာမှ တကယ် မှားတဲ့သတင်း။မဲပေးရလို့ မဲပေးရတယ်။ ပေးပုံပေးနည်းကတော့ နေရာအလိုက် ကွာရင်ကွာပေမပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ဧရာဝတီကလဲ မောင်ရင်တို့ ရုရှက လူတွေဆီက ပြောမှ သိရတာပါ မောင်။ဧရာဝတီကို သတင်းပေးတဲ့လူ ကြိုတင်မဲ ပေးရတဲ့နေရာမှာ ကော်ဗူးကုန်သွားလို့ နေပါလိမ့်မယ် :Pဒါပေမယ့် အစိုးရက တရားဝင် မကြေငြာတဲ့ ကြိုတင်မဲ ပေးရတဲ့ သတင်းကတော့ ဒက်ကနဲပဲ မှန်နေတယ် မလား။အဖျားအနား ကော်ကိစ္စတော့ ကော်ကပ်သူ မကပ်သူ ကွာလို့ နေမှာပေါ့ ဟားဟား
တို့ကတော့ ကော်မကပ်ဘူး။ ကြံ့ဖွံ့ကို အမှန်ခြစ်ထားတာ သံအမတ်ကြီး မတွေ့မှာစိုးလို့.. ဟိဟိဟိ
အရင်းအမြစ်ကို လှန်ပစ်နိုင်မှပဲ အဖျားအနားတွေ မြေသြဇာ ဖြစ်ပေမပေါ့။ ပြောနေလို့လည်း အပိုပါပဲ။
22 October 2010 at 21:04
ကြံ့ဖွတ်ကွတရားတာ မတရားတာ နောက်မှာထား အာဏာရဖို့ အရေးကြီးတယ်ပြည်သူတွေ ငတ်ပြတ်ပြီး နိုင်ငံတော် စုတ်ပြတ်နေပစေ အာဏာရဖို့ အရေးကြီးတယ်ဒါမှ ငါတို့ အဖွဲ့ ကောင်းစားမှာဟိဟိ
ကြံ့ဖွတ်သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ http://www.deyea.org/2010/10/blog-post_22.html
zaw နှမ ယောက်ကျား
ရုရှမှ (zaw) အမည်ခံ စစ်ဗိုလ်သို့ .....ဟေ့၊ နှမပေးယောက်ဖ (zaw) ရေ၊မင်းနှမတွေက ပြောနေတယ်...တုတ်ကြီး သုံးတဲ့ နာမည်ကို လိုက်တုပြီး ရေးမနေနဲ့ ... တဲ့zaw နှမ ယောက်ကျား
22 October 2010 at 22:54
အလံအကြောင်း ရေးသွားတဲ့ ကြာကူလီ zaw ရေမင်းပထွေးတွေရဲ့အလံကို ကြည့်ပါဦးhttp://www.irrawaddy.org/bur/index.php/cartoon/7-cartoon/4361-2010-10-22-11-05-45
မင်းတို့ ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား
မင်းတို့ ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား22 Oct 10, 22:23Nge Naing: တုတ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ သားပြောမယားပြော မကလို့ ပြည့်တန်ဆာပြော လာပြောသွားတဲ့ ရုရှားက IP က အခု ဇော်ရဲ့ IP နဲ့ တခုတည်းပဲ။ တုတ်ကြီးနဲ့ဇော် တယောက်တည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။22 Oct 10, 22:26Nge Naing: တယောက်တည်း မဟုတ်ရင်တောင်မှ မိတ်ဆွေရင်းချာ ဖြစ်မှာတော့ သေချာတယ်။ ဒီတော့ မင်းတို့ ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား။ အဲဒီလို လူမဆန်တာကို အချင်းချင်း ထိန်းရင်ထိန်းပါ။22 Oct 10, 22:30Nge Naing: မထိန်းနိုင်ရင်တော့ ဒီ IP ကို ဘန်းတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ မော်စကိုကနေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စာလာဖတ်နေသူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။2 Oct 10, 22:49အစ်မငယ်နိုင်ရေ: ရုရှက စစ်ဗိုလ် zaw က "SV ယောက်ကျား" နာမည်သုံးပြီး ဒီမနက်ကတင် sv ဘလော့ ( http://www.simpleviewsonmyland.blogspot.com/ ) မှာ ဝင်ရေးသွားပါသေးတယ်။22 Oct 10, 22:56Nge Naing: ဟုတ်ပါတယ် ဒီမှာလည်း ဒီနာမည်ဒီ IP နဲ့ လာရေးဖူးတယ်။ ခက်တာက ကျွန်မဆီမှာ ရုရှားကနေ ကောင်းတဲ့စစ်သားတွေလည်း စာလာဖတ်နေတာ ရှိတော့ ပိတ်လိုက်ရင် တယောက်နှစ်ယောက်ကြောင့် အများထိခိုက်မှာ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။22 Oct 10, 22:58Nge Naing: တုတ်ကြီးတို့၊ sv ယောက်ျားတို့ Zaw တို့ဆိုတဲ့ ကလေကချေ စစ်သားတွေ မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ရုရှားက ကောင်းတဲ့စစ်သားတွေ အများကြီးစာလာဖတ်နေတာ ရှိပါတယ်။(အစ်မငယ်နိုင်ဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်)
ကိုငဘနောင်ခါ အိပ်ရေးပျက် မခံပါနဲ့၊ ကိုငဘ။ရုရှက ဒီမောင်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဦးဏှောက်နဲ့ သုံးသပ် တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ သတ္တိနဲ့ အရည်အချင်း မရှိပါဘူး။ Fully indoctrinated စစ်ကျွန်စစ်စစ် တွေပါ။ကြုံဖူးတဲ့ အိမ်တွင်းပုန်းကုလားမလေး တွေလိုပေါ့၊ ခန်းဆီးနောက်ကွယ်က မျက်လုံးတစုံနဲ့ လောကကိုကြည့်နေရရှာတာပါ။ လူတော့လူသားပါ၊ လင်ပေးစားရင် ခလေးတပြွတ်ပြွတ် မွေးပေးနိုင်တယ်။ သင်ပေးထားသလိုလဲ မဆလာကောင်းကောင်း ကြိတ်ပေးနိုင်ပေမယ့် လူ့ဘောင်ထဲမှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ဝင်နွှဲဖို့ကတော့ “မာလိုးနိမ်း၊ အားကိုကြီး” လိုမျိုးတွေပါ။ အထက် အာဏာရှင်က ချပေးထားတဲ့ ပုံစံခွက်အတိုင်း တသွေမတိမ်း ပြုမူနေရသူမျိုးတွေပါ။ "သွေဖီရင် ဘဝပျက်မယ်" ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အပြည့်အောက်မှာ နေရသူတွေပါ။စနစ်ဆိုးကြီးတခုလုံးကို ဦးတည်ဖျက်နိုင်မှသာ ဒီ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားတွေ အလိုအလျောက် မြေဆွေး ဖြစ်ကုန်ကြမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုငဘမှာ အိမ်တွင်းပုန်းကုလားမလေးကို ဘဝပေးပြီး ပြုပြင် သွန်သင်ပေးရမလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။:)ပြည်သူ
25 October 2010 at 03:07
ငါ့ညီ ဟဟဟမင်းက "သန်းရွှေချစ်သူများ" လင့် တင်ပေးတဲ့ ချက်ကြီး ကို အခုလို ပြောတယ်နော် ........( "ချက်ကြီး ... မင်းတို့လိုကောင်တွေပဲ ဦးသန်းရွှေဓါတ်ပုံကို အဲလို အရှက်မရှိ ပုံတွေ လိုက်လုပ်နေတာ မကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မဖော်ပြပါနဲ့ကွာ နအဖဘက်ကတော့ ဒေါ်စုပုံတို့ ဘာတို့ကို အရှက်မရှိ ပုံတွေကိုတော့ ဖိုတိုရှော့နဲ့ မလုပ်ဘူး ထင်တယ်ကွ အဲဒီဟာလေးတော့ နအဖဘက်က ကောင်းကွက် ရှိတယ်" ............ )ဟဟဟ ... မင်းက ချက်ကြီး ကို အခုလို ပြောနေတာက မင်းက အတော် ရိုးတဲ့ ကောင်လေး နေမယ်။ဒေါ်စုပုံကို နအဖဘက်က ဘယ်လိုများ အရှက်မရှိ လုပ်သလဲ ဆိုတာ ယက်တော ခိုးဝင်တုံးက ကြံ့ဖွတ်နဲ့ နအဖ လက်အောက်ခံ ၀က်ဆိုက်တွေကို မောင်ရင် ၀င်ဖူးရင် မမြင်ဖူးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။အခု ချက်ကြီး တင်ပေးတဲ့ လင့် ( "သန်းရွှေချစ်သူများ" တဲ့... http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-33-03/2008-07-25-08-01-03/6561-2010-10-22-02-15-38 ) က ဓါတ်ပုံက ဖိုတိုရှော့ မဟုတ်ဘူး ငါ့ညီရ။ သန်းရွှေကို တကယ် မနှစ်မြို့သူတွေက ပေါ်တင် တကယ်လုပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ။ချက်ကြီး တင်ပေးတဲ့ လင့်က ဓါတ်ပုံထဲက သန်းရွှေကို မနှစ်မြို့သူတွေက သန်းရွှေ ဓါတ်ပုံကို အဲဒီလို လုပ်တာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဆိုတာကို ကိုယ်မဝေဖန်ဘူး။ ကိုယ်ပြောလိုတာက အဲဒါ ဖိုတိုရှော့ မဟုတ်ဘူး တကယ်ပုံလို့ ပြောတာ။ဒါပဲပေါ့ ငါ့လူရာ.. ကြံ့ဖွတ်နဲ့ နအဖဆိုက်တွေမှာက ဒေါ်စုပုံကို တာဝန်အရ အရှက်မရှိ ပုံတွေ လိုက်လုပ်ကြတာ၊ သူတို့မှာ လုပ်ရမယ့် ၀တ္တရားက ရှိနေတယ်။ အခု ချက်ကြီး တင်ပေးတဲ့ လင့်က ဓါတ်ပုံက သန်းရွှေကို လူတွေ ဘယ်လောက်မုန်းနေလဲ ဆိုတာ ပေါ်တင် ပြနေတာ။ ဘယ်သူမှ ဒေါ်လာရလို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ငါ့ညီ ဟဟဟ ရေ မြန်မာပြည်ဟာ နှာခေါင်းရှုံ့စရာလား၊ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့စရာလား ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံး သိနေပြီးသားပါ။သန်းရွှေဓါတ်ပုံကို ဒီလိုလုပ်တဲ့ အတွက်တော့ သန်းရွှေ image က ထူးပြီး ပို ပျက်မနေပါဘူး။ သန်းရွှေ image က ပျက်ပြီးသားပါ။ ကင်ဂျုံအီကို လူတိုင်း သိနေသလိုပေါ့။ငဘ
ဟဟဟဟဟ နဲ့ ... မင်းမလဲ အတော် ဟောင်လှချည်လား
25 October 2010 at 03:37
ဟဟဟမင်း ကြားမိမှာပေါ့ ...အယ်ကယ်ဦးတင်ဦး စင်ကာပူမှာ ဆေးလာကုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စုပေါင်း ဂါရ၀ပြုကြတယ်။ဘယ်သူမှ အတင်းမခေါ်ရဘူး။ဒါမှ အစစ်ကွ။ဘယ်သူမှ ဒေါ်လာရလို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ငဘ
25 October 2010 at 03:42
ဟဟဟငါ့ညီရ"စစ်တပ်" ဆိုတာကြီးနဲ့ "နအဖ" ဆိုတာကြီးကို တွဲမမြင်စေချင်ရင် မောင်ရင်တို့ စစ်သားဝန်ထမ်းတွေကလဲ နအဖ လုပ်သမျှနဲ့ ကင်းကင်းနေ။ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေ မတရားလုပ်တာ မှန်သမျှကို မောင်ရင်တို့ စစ်သားဝန်ထမ်းတွေက မထောက်ခံပဲ ကိုယ် ပညာသင်စရာရှိတာ သင်ပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။မင်းတို့ စစ်ဗိုလ်တွေဖက်က အချို့သော သူများရဲ့ ခံစားချက်ကိုလဲ ငါ နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါဆိုရင် မင်းတို့ကို အဲလို ပတ်မရမ်းချင်လို့ အငြင်းအခုန်တောင် အပြင်းအထန် မလုပ်ဘူး။ တကယ် အငြင်းအခုန်လုပ်မယ် ဆိုလဲ မောင်ရင်တို့ တဖွဲ့လုံး ဆင်းလာပြီး ငြင်းလဲ ကိုယ့်ကို နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ဆို မောင်ရင်တို့ စီနီယာတွေထဲမှာ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေ ရှိသလို ဒီမိုကရေစီဖက်မှာလဲ ကိုယ်က အဖက်ဖက်က အကြောင်း အကုန်သိနေလို့ပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အချက်အလက်နဲ့ပဲ ကောင်းကောင်း ပြောတယ်။အရင်က ကိုယ်တိုင်လဲ စီးချင်း ခနခန ထိုးခဲ့ဖူးသူပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အသေတိုက်ကြတော့လဲ ရန်မငြိမ်းတာပဲ အဖတ်တင်တယ် ဘာမှ အဖြေမထွက်မှန်း သဘောပေါက်လာတယ်လေ။ မင်းတို့ စီနီယာ ကိုယ်တို့ဘော်ဒါတွေ ဟိုကိုပြန် ... ပြင်ဦးလွင် စာပေ ပြန်ရောက်လိုက်.. မြိုင်။ ကျောက်ဆည် ဓါတ်တော် ရောက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ဘာမှ မတည်မြဲမှန်း သိတော့မှ သူတို့ ယုံကြည်ခဲ့တာတွေ တလွဲ ဖြစ်နေမှန်း သိကြတာ။ငဘ
ဟဟဟကိုပြည်သူတို့၊ ကိုမီးဒုတ်တို့က မောင်ရင်တို့ကို "အသိအမြင် နည်းတဲ့လူတွေ" လို့ ပြောတာကို မခံချင်ရင် ဟဟဟ တို့ကလဲ နအဖဖက် ပင်းတဲ့ စကားတွေ မပြောနဲ့လေ။ ဒီမိုကရေစီဖက်က ပြောတာ မှားတဲ့အချက် ရှိရင် မှားတဲ့အချက်ကို "မှားတယ်" ပဲ ထောက်ပြ။ မောင်ရင်တို့က နအဖ ဖက်က ကာကွယ်ပေးတဲ့ သဘော မဖြစ်စေနဲ့။သိထားဖို့က မောင်ရင်တို့က ၀န်ထမ်း။ ပြည်သူ့ဖက်မှာပဲ ရှိရမယ်။ "စစ်တပ်က လူကြီး" ဆိုပေမယ့် "စစ်တပ်က လူကြီး" ဆိုတာလဲ "၀န်ထမ်း" ပဲ။ သူက ၀န်ထမ်းလို မနေပဲ ပြည်သူပြည်သား ထိပ်ပေါ်မှာ တက်ထိုင်ချင်နေလို့ မရဘူး။ မောင်ရင်တို့က တကယ် လုပ်သင့်တဲ့ အမိန့်ကို နာခံ။ မလုပ်သင့်တာအတွက်တော့ လိုက် ကာကွယ် ပြောပေးမနေနဲ့ပေါ့။ အဲလိုဆိုရင် ဒီမိုကရေစီဖက်က လူတွေကလဲ သူ့အလိုလို လိုက်ပြောင်းလာကြပါလိမ့်မယ်။၈၈ တုံးက ဟဟဟ ငယ်အုံးမယ်။ ဘာမှတောင် မသိလောက်ဘူး။ ၈၈ တုံးက စစ်တပ်က လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ထောင်နဲ့ချီပြီး သတ်ထားတဲ့ကြားက ဒီမိုကရေစီဖက်က လူတွေက "စစ်တပ်ဆိုတာ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားကောင်းဘူး" လို့ သဘောထားခဲ့ကြတာပါ။ အခု မောင်ရင်တို့ကို ဒီမိုကရေစီဖက်က လူတွေက "စစ်ကျွန်တွေ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ပြောတယ်" ဆိုတာက မောင်ရင်တို့ စစ်ဗိုလ်တွေက နအဖ ဖက် ပင်းတဲ့ စကားတွေ ပြောနေလို့ ပေါ့။ နအဖ က မှားနေတာ၊ မတရား လုပ်နေတာကို မောင်ရင်တို့က သိနေ မြင်နေရဲ့သားနဲ့ မျက်လုံးကို ဇွတ်မှိတ်ပြီး နအဖ ဖက်က ကာကွယ်ပေးတဲ့ သဘော ဖြစ်နေလို့ပေါ့။ငဘ
ဟဟဟမင်းက ၈၈ အရေးအခင်း ဗီဒီယိုလောက် ကြည့်ဖူးရုံနဲ့ အကြောင်းစုံ ဘယ်သိမလဲ။ ဘာလို့ ၈၈ အရေးခင်း ပေါ်ရတယ်က အစ ကြည့်မှ အကုန် သိမှာပေါ့။ပြောရရင် ၈၈ အရေးအခင်း မတိုင်ခင်တုံးက မြောက်ကိုရီးယားက ဘယ်လို ဗုံးလာခွဲတယ်.. ဘယ်လို စော်ကားတယ်က အစ မဆလအစိုးရက နိုင်ငံသားတွေ မွဲတေအောင် ဘယ်လိုလုပ်တယ် အဆုံး အကုန်သိမှ ၈၈ အရေးအခင်း အကြောင်းကို မင်း နားလည်မယ်။မင်းက အကုန်မသိတော့ စစ်တပ်က လူတွေ အသတ်ခံရတယ်ပဲ သိတာ။ လူတွေက စစ်တပ်ကို ၀ိုင်းမျှော်လင့် တောင်းပန်နေချိန်မှာတောင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရေကန်တွေမှာ အဆိပ်ခပ်တာ။ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက စက်ရုံတွေကို ၀င်သိမ်း ၀င်လုပြီး အရပ်သားတွေက ၀င်လုသယောင် လုပ်တာ။ နောက်ဆုံး ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဆေးကျွေးထားတဲ့ လူတွေကို လွှတ်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေ ကြားထဲမှာ ထည့်ပေးပြီး ဖျက်ဆီးခိုင်းတာ။ ဒါတွေကို မောင်ရင် မသိရင် အဖြစ်မှန်နဲ့ ဝေးနေမယ်။ငဘ
ဟဟဟမြသန်းစံ တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ၀ါဒဖြန့်တွေက ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ "ပါပီမ ဇာတ်လမ်းတွဲ" တို့ ၊ "လှိုင်းကြီးလှေထန် ဖြစ်ရပ်မှန်" တို့လို ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဟဟဟ တို့ စစ်တပ်ထဲမှာ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်ပြီး မောင်ရင်တို့ ဦးနှောက်ထဲကို ထပ်တလဲလဲ ရိုက်သွင်းထားတော့ မောင်ရင်တို့က အစိုးရ လိမ်ညာဝါဒဖြန့် ရုပ်ရှင် စာအုပ်တွေကို အမှန် ထင်နေတာ။စစ်တပ်ကလူ မပြောနဲ့ .. ၈၈ နောက်ပိုင်းမှမွေးတဲ့ သာမန် အရပ်သားတွေတောင် ၈၈ အရေးအခင်း အဖြစ်မှန်ကို မသိသူတွေ အများကြီးပဲ။ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ကွဲလွဲလာခဲ့တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူတွေကြားက အကွဲအပြဲကို သေချာ သိချင်ရင် ၀ါဒဖြန့်တွေကြားထဲမှာ မျောမနေမှပဲ သိနိုင်မယ်။ငဘ
ဟဟဟအဲဒါတွေကို မင်း နားမလည်ရင် လူတွေက ဘာကြောင့် မင်းတို့ နအဖကို ဆန့်ကျင်ကြသလဲ ဆိုတာကို မင်းနားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင် မင်းက ဘာမှမသိပဲ ငထွား ကြားက ၀င်နာမယ်.. နအဖကို ကာမယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက် ဖြစ်ပြီး မင်းတို့ စစ်တပ်ပဲ လူ ပိုအမုန်းခံရမယ်။ ပြည်သူပြည်သားက ကိုယ့်နိုင်ငံက စစ်တပ်ကို ပြန်လည် ဆန့်ကျင်နေတာလောက် ဆိုးရွားတာ မရှိဘူး။ အဲလိုတွေ မဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ မင်းတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ငဘ
25 October 2010 at 05:12
ဟဟဟမင်းလေသံ ကြည့်ရတာ မင်းက ၈၈ အရေးအခင်းကိုရော၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကိုရော တကယ်ကို နားမလည်တဲ့ ပုံပဲ။ ငါမေးမယ်.. မင်း ဗိုလ်အောင်ကျော်ကို ကြားဖူးသလား၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မဖြစ်ခင်က သူ ဘာခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မင်းတို့ သိလား။မင်းတို့ရဲ့ နအဖနဲ့ နအဖ အဖေ မဆလခေတ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ သူ့ကျွန်ခေတ်လို့ ပြောရတဲ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်လောက်တောင် လွတ်လပ်မှုမရှိ.. နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှု မရှိတာ မင်းသိသလား။ အဲဒါတွေ မသိရင် မင်းကို ဆက်ရှင်းပြဖို့ ငါ စိတ်မရှိတော့ဘူး။ငဘ
25 October 2010 at 05:19
ဟဟဟ"သမိုင်းပေးတာဝန်" ဆိုတာ ကျောင်းသားတွေကမှ အစစ်။ ကျောင်းသားတွေက အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ခေတ်အဆက်ဆက် တော်လှန်လာခဲ့သူတွေ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကွ။ မင်းတို့ စစ်တပ်သမိုင်းထက် စောတယ် မှတ်ထား။ ဒါကြောင့် "သမိုင်းပေးတာဝန်" လို့ ပြောကြတာ။ အဲဒီ ပညာတတ် ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဦးစီးပြီး ဘီအိုင်အေ ဆိုတာ တည်ထောင်ပြီး အခု မင်းတို့ ရဲ့ မဆလခေတ် စစ်တပ်၊ နအဖခေတ် စစ်တပ် ဖြစ်လာတာ။ ကျောင်းသားတွေက မင်းတိုရဲ့ မဆလခေတ် စစ်တပ်၊ နအဖခေတ် စစ်တပ် သမိုင်းထက် မြင့်မြတ် ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းရှိတယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ကျောင်းသားငယ်တွေ ၈၈ တုံးက တောခိုသွားကြသလဲ သဘောပေါက်လောက်ရောပေါ့။ သဘောမပေါက်ရင်လဲ ကိုယ့်ဖာသာ လေ့လာပေရော့။ဒီလောက် အခြေခံအကျဆုံး အချက်တွေကိုတောင် သဘောမပေါက်ပဲနဲ့တော့ အခုလို မင်း ထင်ရာမြင်ရာ တွေ့ကရာတွေကို လျှောက်မပြောနဲ့ပေါ့ကွာ။ မင်း ဘာမှ မသိပဲ ထင်ရာတွေ လျှောက်ပြောနေတာက လူရီစရာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။ ပြီးတော့ ၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ (ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု) အပါအဝင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ပေးခဲ့တဲ့၊ ထောင်အကျခံခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို စော်ကားနေတာပဲ။ငဘ
ဟဟဟ"မလွတ်လပ်ပါဘူး" ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတောင် မင်းတို့ နအဖခေတ်ထက် အပုံကြီး လွတ်လပ်တယ်။ သမဂ္ဂ ရှိတယ်။ လူတွေ စုရုံးနိုင်တယ်။ အစိုးရကို ဝေဖန်နိုင်တယ်။မင်းလဲ ဗိုလ်မှုးချစ်ကောင်း စာအုပ်ဖတ်ဖူးတာပဲ။ အဲဒီ အင်္ဂလိပ်ခေတ် အခြေအနေရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း နားလည်မှာပေါ့.. ဘယ်လောက် လွတ်လပ်ပြီး နိုင်ငံရေး နိုးကြားကြသလဲ ဆိုတာ။မင်း ပြောပြောနေတဲ့ "၈၈ အရေးအခင်းမှာ ခေါင်းဖြတ်တယ်" ဆိုတာက ပြည်သူတွေက ခွေးရူးသုတ်သင်တဲ့ အဆင့်လောက်ပါကွာ။ အသတ်ခံလိုက်ရသူတွေကလဲ လူတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် အဆိပ်ခတ်ခိုင်း၊ စက်ရုံတွေ လုခိုင်း၊ ဖျက်ဆီးခိုင်းထားတဲ့ ဒရှိုဒလံ လုပ်ထားတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်ခိုင်းတဲ့ လူတွေပဲ.. ဘယ်မှာ လွမ်းစရာ ရှိတုံး။ငဘ
ဟဟဟအခုခေတ်လဲ အခြေအနေ ပေးလာရင် အဲဒီ ၈၈ အရေးအခင်းလို တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်မလာဘူး မပြောနိုင်ဘူး။ ငါ့ညီ ဟဟဟ လို ဟစိလေး တစ်ယောက်တော့ အဲဒီကြား မပါစေချင်ပေါင်ကွယ်။ လိမ္မာစွာ ကြည့်ကျက်နေပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။ငဘ
ဟဟဟ"ဘာလို့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် တောခိုရလဲ" ဆိုတော့ အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ စစ်တပ်က မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ပြုမူလာလို့ပေါ့ကွယ်။အရေးခင်း အရှိန်ရနေတုံးက လူတွေက စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေကို ပစားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးတွေရဲ့ ရန်ပြုခံရမယ့်ဘေး၊ အသက်ဘေးက စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေကို ပြည်သူတွေက ကယ်တင် စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေက အဲဒီ မျက်နှာကိုမှ မထောက်ပဲ အာဏာရှင်ဖက်က ပင်းပြီး လူတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ထပ်ပြီး အသေပစ်သတ်တယ်။ စစ်တပ်က လမ်းတွေပေါ်မှာ ပြည်သူတွေကို ထောင်နဲ့ချီပြီး ပစ်သတ်ထားတာ တစ်လပဲ ရှိသေးလို့ "ထပ်မပစ်တော့ဘူး" လို့ ထင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတုံးအရုံး ထပ်သေရတယ်။အဲဒီလို အာဏာရှင်က သူ အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် ဥပဒေမဲ့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ထပ်တလဲလဲ ပစ်ခိုင်းတိုင်း ပစ်၊ သတ်ခိုင်းတိုင်း သတ်တဲ့ စစ်တပ်ကို လူတွေက အယုံအကြည်မရှိတော့လို့ တောခိုတာပေါ့။ငါ့ညီရယ် ... မင်းနှယ် ............ငဘ
ဟဟဟမင်းတို့က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အကြာကြီး နေဖူးသူတွေ မဟုတ်တော့ မသိနိုင်ဘူး။ ငါပြောမယ်ကွ.. ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်လောက်တဲ့ အရာကလွဲရင် ဘယ်သူမှ တကူးတက နိုင်ငံခြားမှာ ရှောင်မနေချင်ဘူး။ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်လဲ အချိန်နဲ့အမျှ သူ မြန်မာပြည် ပြန်ချင်နေမှာပဲ။ မင်းတို့က အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်စကားတွေအရ "ဟို ဒေါ်လာစားဒီမိုတွေတော့ ဒေါ်လာတွေ စားပြီး မြန်မာပြည် ပြန်လာချင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး" လို့ မြင်နေတာ။တကယ်က အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြန်နေချင်သူတွေချည်းပဲ။ မတရားတဲ့ အစိုးရနဲ့ မတရားတဲ့ စနစ်သာ မရှိပါစေနဲ့ .. ချက်ချင်း မြန်မာပြည် ပြန်လာကြမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဆိုတာ အခု တစ်ကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာ ရောက်နေကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်လာတာထက် ပိုစေရမယ်။ငဘ
ဟဟဟအင်း.. မပြောလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။စိုင်းသိန်းဝင်း ဆိုတာ ဘယ်လို လူစားမှန်း မသိပဲနဲ့ ရမ်း မစွပ်စွဲနဲ့လေ။စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ပါဆင်နယ်လ်ဖိုင်လ်မှာ မှင်နီတစ်စက် မစွန်းဖူးပါဘူး။ မဟုတ်တာလုပ်ပြီးမှ ကြောက်လို့ပြေးရအောင် သူက ဘာမှ မဟုတ်တာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူ့အိမ်ကို လာသွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေတောင် သူ့ကို လေးစားကြတဲ့ သူတွေ ပါပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ပြောနိုင်လဲ ဆိုတော့ စိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဗထူးမှာ ခွဲမှူး အတူတူ တက်ခဲ့ဖူးလို့ပါကွာ။မီးဒုတ်
ဟဟဟကိုစိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဗထူးမှာ ခွဲမှူးသင်တန်း အတူတူ တက်ခဲ့တယ်။ ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက ခွဲမှူးသင်တန်း ၁၆၁ မှာ စာမေးပွဲ ခြောက်ခုလုံးကို မဖြေပဲ နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိတ် မရောက်ခဲ့ဘူး။ သူ့ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ခံနေလို့။ အဲဒီ တစ်ယောက်က စာမေးပွဲရမှတ်ကို ပြင်လို့ ကာရိုက်တာ ကေ့စ် နဲ့ ဘိတ်ချေးရတာ။ ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက ကာရိုက်တာ ကေ့စ် လုံးဝမ၇ှိဘူး။သေချာတာက မတရားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မုန်းတဲ့ ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပဲ။နောက်တော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ သူနဲ့ ငါ တစ်ခေါက် ထပ်တွေ့တယ်။ "မြိုင်ကို လွင့်သွားပီ" တဲ့။ အရင်က ပြင်ဦးလွင်စာပေ ၂ ထဲမှာ နေတယ်။ လွင့်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ပြင်ဦးလွင်က စက်ရုံကို ဗခစိန်ဝင်းနဲ့ သွားစစ်တုန်း “ဗခ.. ဒီစက်ရုံက အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောမိလို့တဲ့။မီးဒုတ်
25 October 2010 at 07:01
( "အဲဒါဆို စိုင်းသိန်းဝင်းက အကုန် မှန်တယ်ပေါ့ စိုင်းသိန်းဝင်းက ထောက်လှမ်းေ၇းလဲ လုပ်ခဲ့တယ် အမေရိကန်သံရူံးမှာလဲ လုပ်ခဲ့တယ် ထောက်လှမ်းေ၇းမှာတုန်းကလဲ စိုင်းသိန်းဝင်းက လုံးဝလုံးဝ ဘာမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူး အမေရိကန်သံရှုံးမှာ တာဝန်ကျတော့လဲ ဘာမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူး မတရားတာ ထပ်တွေ့နေရတော့ စိုင်းသိန်းဝင်းက စစ်တပ်ကို လုံးဝ ရွံမုန်းသွားပိးတော့ ခိုလှုံသွားတယ် ဆိုပါတော့" ................... လို့ ဟဟဟ က ပြောတယ်နော်။ )ဟဟဟ"စိုင်းသိန်းဝင်းက ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ဖူးတယ်" လို့ ပြောဖူးလို့လား။ ကိုအောင်လင်းထွဋ်နဲ့ မှားနေပီ နဲ့ တူတယ် ကိုယ့်ညီ။မီးဒုတ်
25 October 2010 at 07:30
ဟဟဟဟိုးအစကနေ ပြောမှရမယ်။ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက အရင်တည်းက ကာကွယ်ရေးစက်ရုံမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ စက်ရုံအတွေ့အကြုံ တော်တော်ရှိတယ်။ တခြား ရုရှားပြန်တွေလို မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ကပစ နေတုန်းက ယိုပေါက်ဟာပေါက်တွေကိုလည်း သူ စာရေးတိုင်ဖူးတယ်တဲ့။ အဲဒီလို စာရေးတိုင်ပြီး မကြာခင်မှာမှ ရုရှား အပို့ခံရတာတဲ့။ခုလဲ ပြင်ဦးလွင်က စက်ရုံကြီး တွေ့တာနဲ့ ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက မဟုတ်မဟတ်တွေ၊ အမြင်မတော်တာတွေကို တန်းပြီး ပြောတော့တာပေါ့။ အဲဒီ တစ်ခေါက်ကျတော့ မြိုင်ကို လွင့်သွားတယ်။ စက်ရုံကလည်း သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာက လာဆောက်တာ။မီးဒုတ်
ဟဟဟခိုးတာတွေတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့ကွာ။ understood ပေါ့။ဒါပေမယ့် ခုဟာက နည်းနည်း ခိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ စကတည်းက သောက်တလွဲကြီးတဲ့။ဥပမာကွာ.. သပိတ်ကျင်းကို ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ခိုင်းပြီး ပြင်ဦးလွင်စက်ရုံကနေ လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေလုပ်ပေးဖို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သပိတ်ကျင်းက ဒီဇိုင်းတွေက ဘာမှန်းမသိသေးဘူး။ စက်တွေက ထဲ့ပြီးနေပီ။ ဒီဇိုင်းနဲ့ စက်နဲ့ အစပ်အဟပ် မတည့်တာမျိုးပေါ့ကွာ။ ပြီးတော့ အဲဒီ စက်တွေကလည်း ဝယ်ပေးတဲ့ ပွဲစားက ကော်မ၇ှင်ရရင် ပြီးရော ဆိုပြီးတော့ ဟိုက ထဲ့ပေးလိုက်တာ အကုန် ဝယ်လာတာတဲ့။မီးဒုတ်
ကိုမီးဒုတ်ရေမှာလိုက်ရတာလဲ ဟဟဟ ကို ပြောပြလိုက်အုံး ကိုမီးဒုတ်ရေ။ဂျာမဏီကနေ တိုက်ရိုက် ၀ယ်လို့ မရတော့ စင်ကာပူကနေတစ်ဆင့် ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်ရတယ်။ အပိုပစ္စည်း accessories တွေ လိုတော့ ထပ်ဝယ်လို့ မရလို့ ရပ်ထားတဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီစက်တွေလဲ ကျန်နေသေးတဲ့အကြောင်း .. ညူအိပ်မက် အမက်ကောင်းတုံး တိုင်းပြည်ထဲမှာ မရှိလို့ ခန္ဓာရောင်းစားရတဲ့ မိန်းမခမျာ ငွေလက်ငင်း မပေးနိုင်လို့ ထမင်းကို တန်ဖိုးနှစ်ဆ ပေးပြီး ၀ယ်စားနေရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါအုံး။ငဘ
ဟဟဟအဆိုးဆုံးက သူတို့တစ်တွေရဲ့ဘဝတွေ ကိုယ်တိုင် ဒီလို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ပရောဂျက်တွေထဲမှာ အချိန်ကုန်ခံ၊ ဘဝတုံးခံ နေရတယ်ပေါ့။ဒါပေမယ့် ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက ဘာမှ မလုပ်ပဲ အေးအေးဆက်နေရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးဖြစ်ပြီပဲ။ သူတို့အပတ်စဉ်က ရင်းမှူးတောင် တော်တော်များများ ပြီးပြီးကြပီ။မီးဒုတ်
( "စီနီယာကြီးကလဲ ရုရှားက ပြန်ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ် ခု ရုရှားမှာလား ဒါမှမဟုတ် ခိုလှူံသွားပိးလား ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းမှာလား ဒါမှမဟုတ်.... တစ်ခုတော့ တစ်ခုခုပဲ ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ သူများတွေ ရယ်မယ်နော်" ........... လို့ ဟဟဟ က ပြောတယ်။ )ဟဟဟ ရေအပိုတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ...ဒီလောက် ပြောနိုင်မှတော့ ကိုမီးဒုတ်က စစ်တပ်ကပဲပေါ့...simple views
ဟဟဟကိုယ်က ရုရှားပြန်ပါ။ တပ်က ထွက်ပြီးပါပြီ။ ကိုယ်က အေးဆေးပါ။ ဟုတ်လား။ကိုယ်က ဘီ ပိုး နဲ့ ထွက်တာပါ။ အဲဒါလည်း နောက်ဆုံးပဲလို့ ပြောပါတယ်။ နောက် ဘီ ပိုး ရှိတဲ့ လူတွေကို ပေးမထွက်ပဲ ဆေးကုပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။မီးဒုတ်
( "အော် ဟုတ်ပါပီ ခင်မင်လို့စတာ အိုကေ လက်ခံပါပီ ဆောတီးပါ ကိုမီးဒုတ် နဲ့ မsv ရဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို မသိလို့ပါ ဆောတီးပါ" ........... လို့ ဟဟဟ က ပြောတယ်။ )ဟေး.. ဟဟဟအဲဒါတော့ ကိုယ့်ညီ မှားသွားပီ။ ကိုယ်က မြန်မာတိုင်းကို မောင်နှမလို ခင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပ ရောက်နေချိန်မှာပါ။ ဒါပါပဲ။အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ ထွက်တဲ့ စကားတွေနဲ့ မခနဲ့ပါနဲ့။ မိန်းခလေး နစ်နာပါတယ်။ ယောင်္ကျား ပီပီသသ ပြောပါ။ စစ်သားပဲဟာ..အိုခေ?မီးဒုတ်
ဟဟဟတစ်ခုတော့ ရှိတယ်.. ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက သွားခါနီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ "ငါတော့ ပြေးပြီဟေ့" လို့ပြောသွားတယ်ဗျား။ ဝိုင်းထဲက တစ်ယောက်က မယုံလို့ တစ်လစာတောင် လောင်းလိုက်သေးတယ်။ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက "ငါ ဒီ ပရောဂျက်ကို ဖျက်မယ်" လို့ ကြိမ်းဝါးသွားတာပဲ။ သပိတ်ကျင်းက လူတွေကတော့ ဒီ ပရောဂျက် ပျက်သွားရင် ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းကို ကျေးဇူးတင်နေကြမှာပေါ့။ကိုယ့်ညီကတော့ ပီအိတ်ခ်ျဒီ ပြီးသွားရင် ကျောင်းပဲ ပြန်ရောက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နျူနဲ့ မာစတာ ပြီးထားရင်တော့ အောင်ဖေ ညောင်း သပိတ်ကျင်းပဲ။ ဒီ ပရောဂျက် ရှိသေးရင် ပြောပါတယ်။ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းလည်း ကိုယ့်ညီ ပြောသလိုကို ပြောခဲ့တာပဲ၊ "ကျနော်တို့ကို ဘာဖြစ်လို့ စာသွားသင်ခိုင်းသေးလဲ" ဆိုပြီးတော့။ အကုန်လုံးက သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာက so called dr တွေက စီစဉ်တာ။ ရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ်တွေက ချေးထုပ်မိတာ။ ဟုတ်ပီလား။မီးဒုတ်
( "အဲလို ပေါက်ကရတွေ ဖြစ်ပျက်နေတာကို စိုင်းသိန်းဝင်းက ဝေဖန်မိလို့ အထက်က သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ် ဆိုပီး သူ့ ကို တစ်ခုခု လုပ်တော့မှာကို သိလို့ ထွက်ပြေးပီး ခိုလှုံသွားတယ် ဆိုပါတော့ ဒါဆိုရင် အထက်က လုပ်တာကို နဲနဲ ဝေဖန်မိ၇င် အကြံဥာဏ်ပေးမိရင် ကိုယ်သင်လာတာကို ပြန်ဝေမျှပီး ပြောမိရင် အဲဒီလို ဖြစ်မှာ ဆိုရင် ဘာလို့ ရုရှားကို လွှတ်ပီး ပညာသင်ခိုင်းနေတာလဲ စီနီယာကြီးတို့ကို ရုရှားကိုလွှတ်တုန်းက ပညာတွေသင်ခဲ့ ပြန်လာရင် ငါတို့လုပ်တာကို မဝေဖန်နဲ့ မင်းတိုသင်လာတဲ့ ပညာတွေနဲ့ ဆိုင်သည်မဆိုင်သည် ငါတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ် အဲလိုပြောပြီး လွတ်လိုက်တာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းတို့ကို ငါတို့သုံးနေတာတွေ မသိစေချင်လို့ မင်းတို့က ပွန်းလေးလို ထိုးကျွေးပီးတော့ ဒီလို နိုင်ငံခြားကိုလွှတ်ပါတယ် ဆိုတာ ပြလို့၇အောင် လွတ်တယ် မင်းတို့ တက်ချင်တက် မတက်ချင်နေ လုပ်ချင်တာလုပ် ငါတို့ကစားမှာပဲဆိုပီး လွှတ်လိုက်တာလား အဲလိုဆိုရင် ရုရှားကိုလွှတ်တာ အလကားပေါ့ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ၇တယ်ပေါ့ အိုကေ ဒါဆိုရင် အေးရာအေးကြောင်း နေတော့မယ်လေ တက်လဲ ဘာမှ အသုံးမ၀င်တာ အဲလိုသိလို့ စီနီယာကြီးက ရုရှားကနေ ပြန်ပြီး ထွက်သွားတာပေါ့လုပ်ပါဦး ထွက်နည်းလေး ညီလဲ ထွက်ချင်လိုပါ ဟုတ်တယ်လေ တက်လဲ အသူံးမှ မ၀င်တာ အဲဒီတော့ ပြန်မယ် ထွက်မယ် ပီးရင် လက်ကွပ်တွေ ဒီလောက်တက်နေတာ စာစီစာရိုက် လုပ်စားမယ်" )........... လို့ ဟဟဟ က ပြောတယ်။ဟဟဟ ရေထွက်နည်းတွေ ဘာတွေ သိချင်ရင် မေးလ်ပို.ပြီး မေးကြ ..ဒီနေရာက လုံခြုံမှု မရှိပါ.. အိုကေsimple views
ဟဟဟhaha ဟုတ်တယ်ထွက်နည်းဝင်နည်းတော့ လုံခြုံမှုအရ လုပ်ကြပါ။ငဘ
ဟဟဟအရေးကြီးတာ အခု ပညာသင်ခိုက် တကယ်တတ်အောင်သာ ကိုယ့်ဖက်က သင်စရာရှိတာသင်ပါ။ နောင်အခါမှာ အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုခေတ်ရဲ့ နအဖလို အစိုးရမဟုတ်ပဲ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့လဲ တထစ်ချ မပြောနိုင်ပေဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သာ တကယ် ၀ါသနာပါ ပါစေ။ အနာဂတ်အတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ။ကိုယ့်မှာသာ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိနေပါစေ.. ကိုယ် သင်ယူထားတာ တကယ် အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ရွှီးတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်တွေ့ပါ။ ကိုယ်တိုင်လဲ ပညာသင်ရင်း စိတ်ဓါတ် အကြိမ်ကြိမ် ကျဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နိုင်ငံတကာက သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ရဲ့ expert ဆိုသူတွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်နေပြီ။ အစကတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ကားပွဲစား လုပ်ရတော့မလိုလို၊ အိမ်ပွဲစား လုပ်ရမလိုလို တွေးပြီး စိတ်လေဖူးတယ်။ကျုပ်က မောင်ရင်တို့ ရုရှက မောင်တွေ ကိုယ့်ကဏ္ဍ ကိုယ်သိစေချင်တာပါ။ ကိုယ်ဟာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း။ ပြည်သူ့အခွန်ငွေ စားပြီး ပညာသင်နေတာ ရောက်တုံးရောက်ခိုက် တကယ် တတ်အောင် သင်စေချင်တယ်။ မောင်ရင်တို့ ရုရှက မောင်တွေ အနေနဲ့ နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ အမှုများနဲ့ ကင်းရှင်းသူများ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ တကယ် လွတ်လပ် မျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ်အောက် ရောက်မှ ကိုယ်က မှန်တဲ့ဖက်မှာ နေတဲ့ ကြားက ကိုယ့်ကို မတရား လာရောက် တိုက်ခိုက်သူများကို တုံ့ပြန်တာက တကဏ္ဍပါ။အဲဒါလေး ခွဲခြား မြင်တတ်ရင် တပ်မတော်ဟာ "ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်" ပြန်ဖြစ်ပြီး သိက္ခာ ပြန်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အမြင်အပေါ်မှာတော့ မင်းတို့ သဘောထား ကွဲလွဲစရာ အကြောင်းမရှိဘူး ထင်ပါတယ်။ငဘ
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( "ဒီးဒူတ် မင်းဘာလည်းတော့မသိဘူး။ နည်းနည်း သိတာကို များများ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောပြီး အာချောင်နေတာပဲ။ မင်း သိထားတဲ့အမြင်နဲ့ ဝေဖန်ရုံနဲ့ နိုင်ငံကြီး ဘာမှ မပြောင်းလဲသလိူ တပ်မတော်ကြီး ဒီအတိုင်း ဆက်သွားနေမှာပဲ။" ) ........ တဲ့။ဗခစိန်ဝင်းက သူ့ကို ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတာကို ကိုစိုင်းသိန်းဝင်းက ပြောသေးတယ်။ ခုနက ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ ပြောသွားသလိုပဲ.. ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ဘာတဲ့.. "ခင်ဗျားထက် လူကြီးတွေက ခေါင်းကြီးတယ်။ ခု မြင်တာလေးနဲ့တင် မဝေဖန်နဲ့အုန်း" တဲ့..ငါတို့တောင် ဝိုင်းဟားလိုက်သေးတယ်.. "လူကြီးတွေ ခေါင်းကြီးတာ နွားခေါင်းလောက်ကြီး ကြီးတာ နှေမှာ" လို့ ..မီးဒုတ်
( "ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ် မလုပ်ချင်လို့ တပ်ကထွက်တာ ကိုယ်ရဲ့ ဆန္ဒပဲ။ ရှေ့ဆက်ပြီး ငါတပ်မတော်ထဲမှာ မရှိတော့လို့ တပ်မတော်က ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လျောက်အာချောင်နေတာကတော့ အသိညဏ် နည်းရာ ကျပါတယ်။ ရင်ကျက်မှူမရှိဘုး ဆိုတာ မငိးလိုကောင်မျိူးတွေ ဘာဘွဲရရ ပညာတက်လို့ ခေါ်လို့ မရတာ မငိးလိူ ကောင်မျိူးတွေ" ) .....................လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ သို့အလဲ့ .. တယ်ရမ်းပါလား .. ဆန့်ကျင်ဘက် ဆိုတဲ့ မောင်က။ နေပါအုံး မင်းတို့ကို "ပညာတတ်များ".. "တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိသူများ" ရယ်လို့ ဘယ် ပြည်သူပြည်သားအစစ် က သတ်မှတ်သတုံး။မင်းတို့ဖာသာ မင်းတို့ တပ်ထဲက လူအချင်းချင်း၊ ဒါမှမဟုတ် နအဖ အစိုးရက အသိအမှတ် ပြုတာလောက် လာမပြောနဲ့။ ဘယ် အရပ်သားကဏ္ဍက အသိအမှတ် ပြုတုံး။ ဘယ် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် ပြုတုံး ... လင်းစမ်းပါအုံးကွဲ့။ငဘ
( "ဘယ်သူမှ သတ်မှတ်စရာ မလိုဘူး။ ကိုယ်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ဖို့ပဲ လိုတယ်" ) ............လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ သို့အဟဲ .. မင်းလေသံက တကယ် ပညာရှင် မဆန်တာပဲ။လုပ်ပါအုံး .. မင်း အခု လေ့လာနေတာ ဘာ ဘာသာရပ်တုံး။ ဘယ်အဆင့်တုံး။ ဘယ်လို ကွန်ဖရင့်တွေမှာတက်လို့ မင်း research ကို present လုပ်ပြီးပတုံး။ဘာဂျာနယ်တွေထဲ မင်းရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ publish လုပ်ပြီးပတုံး။ ဒါတွေ မင်းတခုမှ မဖြတ်ကျော်ရသေးရင် မင်းဟာ ဆန်ကုန်မြေလေး ပညာတော်သင်ပဲ။ငဘ
( "ကိုယ့်အဆင့် ကိုယ်သိဖို့ပဲ လိူတယ်။ မင်း ဒီမှာ စောငိ့ရှူးထပြီး လာမေးမနေနဲ့။ မေးတာကိုက ကျက်မပြည့်မှန်း သိသာနေပြီ" ) ............လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူငါမေးတာ ကြပ်ပြည့်မပြည့် နိုင်ငံတကာက ပညာတောင်သင် ဆိုသူတွေ ဘာတွေ လုပ်ရသလဲ၊ ဘယ်လိုအဆင့်တွေ ဖြတ်ကျော်ရသလဲ မင်းအရင် သိအောင် လုပ် .. ဟုတ်ပီလား။အဲဒီလောက်လေး မေးတာတောင် မင်း မဖြေနိုင်ရင် ရုရှမှာ မင်း ဘယ်လို ပညာသင်နေတာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ် မင်းက ငါတို့နဲ့ ငြင်းနိုင်မှာလဲ။ပညာတော်သင် တစ်ယောက် သိသင့်တဲ့ အရာ၊ လုပ်ရတဲ့ အရာ၊ ရေးသားရတဲ့ စာတမ်း၊ တက်ရတဲ့ ကွန်းဖရင့်နဲ့ ထုတ်ဝေရတဲ့ ဂျာနယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်း ငါ့ကို သိချင်တာ ကြိုက်ရာမေး .. ငါဖြေမယ် ဟုတ်ပလား။ မင်းစောက်ရူးလား .. ငါစောက်ရူးလား .. ကြည့်ကြတာပေါ့။.. ဘယ်လိုလဲ။ငဘ
( "မင်းလို ကောင်မှိူးကို ငါ ဘာလုပ်နေပါတယ်။ ငါ ဘာတွေ လေ့လာနေပါတယ် ပြောရလောက်အောင် ဒီလိုနေရာမှာ ပြောစရာ အကြောင်း မရှိဘူး " ) ....................လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ သို့မင်းမှာ ပြောစရာမှ မရှိတာ။ မင်း ဘာများ ပြောနိုင်မှာလဲ။ ဘာမှ အင်တာနေရှင်နယ် academic အကြောင်း မသိပဲ လာပွားရဲတဲ့ မင်းကိုပဲ သနားတယ်။ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိရင် မင်း ငါနဲ့ ဝေးရာမှာ နေ။ မနေချင်ရင် ငါမေးတာကို မင်းဖြေ။ မင်းမေးတာကို ငါဖြေမယ်။ အဲလို ဇမရှိပဲ လာဆွမယ် မကြံနဲ့ .. ကောင်လေး။ ငါက မသိတာကို "မသိပါဘူး" လို့ ရိုးရိုးသားသား ပြောတဲ့သူကိုပဲ ကောင်းကောင်း ပြောတယ်။ငဘ
( "ကိုယ်အလုပ် ကိုယ်လုပ် အပိုတွေ ပြောမနေနဲ့" ) ....................လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ သို့ငါ့အလုပ် ငါလုပ်ရင်း ငါအားတဲ့အချိန် ငါပြောစရာရှိတာ လာပြောနေတာ။ မသိပဲ ရမ်းသမ်း စွတ်ပွားနေတဲ့ကောင် မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းလဲ မေးဖို့ ၀န်မလေးဘူး။ သိသယောင်နဲ့ ဆရာကြီးဟန် လာလုပ်သူတွေကိုလဲ မေးခွန်းထုတ်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး။ မင်းတို့ တံဆိပ် တပ်ချင်တိုင်း လျှောက်တပ်လို့ ရမယ့် ဒီမိုတွေ ဘာတွေလို မှတ်မနေနဲ့။ငဘ
ကိုငဘသြော် ကိုငဘ..ကိုငဘ.. အလကားနေရင်း သွေးတိုးနေပြန်ပါပီ.. ထားလိုက်ပါ.. အေးဆေး။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ” က ငယ်ငယ်တုန်းက အပြင်ဖျားပြီး သိုင်းရွိက် ဂလင်း တချို့ ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဗျာ။အဲဒီမှာ ဦးဏှောက် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးရမယ့်အချိန်မှာ မဖွံ့ဖြိုးပဲ အဲဒီလို ကြီးပေါကြီး ဖြစ်နေရတာပါ။မီးဒုတ်
ကိုမီးဒုတ်ရေ:Dအေးဆေးပါတယ်။ရုရှက ပညာတော်သင်တွေ သင်ကြား လေ့လာနေရတဲ့ အဆင့် ဘယ်လိုများလဲ ဆိုတာ တောက်ကြည့်ချင်ယုံ သက်သက်ပါ။ ရူးလို့ ဖင်တုံးလုံး သွားနေသူက အ၀တ်အစား ၀တ်ထားသူများကို "အရှက်မရှိသူတွေ" လို့ ဟားနေသူနဲ့ တူနေလို့ပါ။ငဘ
ကိုငဘသူုတို့တွေက တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို မရောက်သေးလို့ပါ။ မဟုတ်တာ မမှန်တာတော့ ကြိုက်မယ့်လူတွေ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ စစ်တပ်ထဲမှာ (အရာရှိတွေထဲမှာ) တောင်မှ army compound ဆိုတာ သတ်သတ် ရှိသေးသဗျ။ အရာရှိသား အရာရှိတွေပေါ့ဗျာ။ "တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ" ဆိုတာ သူတို့မှ သူတို့အစစ်အပေါ့။ အရာရှိအချင်းချင်းတောင် သူတို့က ပို“စစ်” သလိုလိုဗျ။ သူတို့အချင်းချင်း ကျတော့လည်း ဟုတ်နေတာပဲ။ အဖေရာထူးကြီးရင် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းလည်း ဖားတာပဲ။အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာ အောင်ပွဲတွေ ပျော်ပွဲတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ လုပ်ကြတာပေါ့။အဲလို လူတွေကျတော့ ဘာမှကို ပြောလို့ မရတော့တာ။ ဗိုလ်ချုပ်တွေ လုပ်သမျှ အကုန်မှန်တယ်။ တပ်မတော်က ပြည်သူ့တပ်မတော်ကို မဟုတ်တော့ဘူး။ "သူတို့အဖေတပ်မတော်" လုံးလုံး။ အချင်းချင်းတောင် သူတို့က "ပိုလွန်းလို့" သောက်မြင်ကပ်ယူရတယ်။ခုနက ငတိလည်း အဲလို ကောင်စားမျိုးနေမှာပေါ့ဗျာ။ သူအဖေက ဒုမှူးကြီး/မှူးကြီး အဆင့်လောက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။ တပ်ထဲမှာလည်း ဆက်ရှိရင် ရှိနေအုန်းမှာပေါ့။ အဲလိုကောင်မျိုးတော့ အဖက်ကို မလုပ်နဲ့။ ဗိုလ်ခွေးချေးတွေ..မီးဒုတ်
ကိုမီးဒုတ်အဲဒီ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျ။ခင်ဗျားလဲ သိသားပဲ.. အထက်အောက်ကြီးငယ် brotherly ဆက်ဆံရေးကိုးဗျ။ ဥပမာဗျာ.. စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်မှုး ကျုပ်ဦးလေးက ဦးပိုင်က သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ဗိုလ်မှုးကြီးနဲ့ brotherly ဆိုပြီး သူတို့ အချင်းချင်း win-win ဆက်ဆံရေး ထူထောင် အလုပ်လုပ်ကြသလိုပေါ့။ သူ့အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်က ကာကွယ်ပေး၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို သူက ကာကွယ်ပေးနဲ့ အပြန်အလှန် အဲဒီလို လုပ်နေရတာကိုက လောကနီတိလာ ထုံးတမ်းစဉ်လာတရပ်လိုပဲ။ကျုပ်ညီမ၀မ်းကွဲတွေကိုတောင် အဲလို အမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ချာ ပေးဖူးပေမယ့် တော်ရုံနဲ့ နားမ၀င်တာ။ ဥပမာဗျာ သူတို့အဖေ ကျိုက်ထီးရိုး ခရီးထွက်တယ်။ ဟိုက ခရိုင်မန်နေဂျာ ဘာညာတွေက ဘုရားကြွလာသလို ကြိုဆိုကြတယ်။"ဒါတွေဟာ အလုပ်မဟုတ်ဘူး" ဆိုတာကို ကိုယ်က ဘယ်လောက် ရှင်းပြပြ၊ ညီ၊ ညီမတော်တွေက နားမလည်ဘူးဗျ။ ကလေးသဘာဝအရ "သူတို့အဖေမှာ ဒီလို ခံစားဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်" ပဲ ထင်ကြသကိုး။ ဒါကို ဘေးက အမြင်နဲ့ ဝေဖန်တော့ စောက်တင်းပြောတဲ့ ကောင်လိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်ရော။ ခုနက ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ လို ကောင်တွေက လူကို အသားလွတ် အဲဒီလို တံဆိပ်ကပ်ရော။ အဲဒီ ဓလေ့ကပဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလို ဖြစ်ရော။အဲဒီလို မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အလုပ်မဟုတ်တဲ့ အလေ့အထတွေ၊ အချိုးမကျတဲ့ ကျင့်ထုံးတွေကို ပြုပြင်နိုင်အောင် ထောက်ပြနေသူတွေကိုပဲ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ လို ကောင်တွေက "တိုင်းပြည်သိက္ခာကျအောင် လျှောက်ပြောနေသူတွေ" လို့ စွပ်စွဲ ပြောနေတာ တွေ့ရတော့ အတော် ခွီးသဗျ။ငဘ
ကိုငဘဟုတ်ပါ့။ သွားပြောရင်တောင်မှ “မနာလိုလို့ ပြောတယ်” လို့တောင် ပြန်ပြောခံရအုန်းမယ်။ခုလည်း “ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ” က ကျနော့်ကိုပြောတာ အဲဒီ သဘောပဲလေ။ "ကိုယ်စစ်တပ်က ထွက်သွားပြီ ဆိုတော့မှ စစ်တပ်မကောင်းကြောင်း လာပြောမနေနဲ့" တဲ့။ စီဘောက်ထဲမှာတောင် သူ့အမေလင်ကို ကြောက်နေရအုန်းမလို။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”ကြားလား “ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ” .. ငါက "လူကြီးတွေ ခေါင်းကြီးတာ နွားခေါင်းလောက် ကြီးတာ နေမှာပေါ့" လို့ ပြောလို့ မင်းက တင်းတာ မလား။ ဟဲဟဲဟဲ ဟုတ်သားပဲ ဥစ္စာ။မီးဒုတ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( "မင်း ခုလို လျောက်ပြောနေတာ စောင့်တင်းပြောတဲ့အဆင့်ထက် မပိုဘူး ဆိုတာ သိဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ် ဘယ်လောက် အဆင့်ရှိလည်း ဆိုတာ မင်းတခြား လူတွေနဲ့ compare မလုပ်နဲ့။ မင်းရဲ့ တပတ်စဉ်ထဲမှာပဲ ကြည့်ပြီး နှိူင်းရှင်ကြည့်။" ) ................ တဲ့။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”ဟေ..ငါ့အပတ်စဉ်က ဘယ်သူနဲ့ နှိူင်းပြောရမှာလဲ? ပြောပါအုန်း။ ငါ့အပတ်စဉ် မင်း သိလို့လား?ဒီလိုပြောတာ မင်းပြောသလို သောက်တင်းပြောတဲ့ အဆင့်ဆိုတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ? လင်းစမ်းပါအုန်းကွ။ ကောင်လေး.. ဘယ်ရောက်သွားပြီတုန်း။ ပြောတာတွေကလည်း အမြီးအမောက်က မတည့်ဘူး။ ကြည့်ရတာ.. ဖရက်ဂ်မြန့် သောက်ပြီး မူးနေပီနဲ့ တူတယ်။..မီးဒုတ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( "မင်းက အမှန်တော့ စစ်တပ်ထဲက ပစ္စည်းမဲလူတန်းစား ဘ၀လို စိတ်ခံစားမှူတွေနဲ့ စစ်သားစိတ်ဓါတ် မရှိ စောင့်တင်းပြောဘ၀နဲ့ပဲ သိတာလေးတွေ အာချောင်နေတာပဲ" ) ................ တဲ့။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”ဟားဟား.. တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလား? "စစ်သားစိတ်ဓါတ်" ဆိုတာ ပြောစမ်းပါအုံးကွ။ မှတ်သားရတာပေါ့။မနေ့တနေ့ကမှ စစ်ထဲ ရောက်လာပီး မင်းက ပိုသိသလိုလိုတော့ မပြောနဲ့ကွာ။ ရုရှားကို လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်ကျော် ဆယ်နှစ်ကတည်းက ငါရောက်ခဲ့တာ။ မင်း မတက်ဖူးသေးတဲ့ စစ်တပ်က သင်တန်းတွေလည်း ငါ အကုန် တက်ဖူးပြီးပြီ။ မင်းမသိသေးတဲ့ စစ်တပ်က လက်တွေ့ဘဝတွေကိုလည်း ရင်ဘတ်နဲ့ ခံစားပြီးပြီ။ ဟုတ်ပြီလား။ "စစ်သားစိတ်ဓါတ်" ဆိုတဲ့ စကား မင်းလို "ချွတ်တား" နဲ့ မတန်သေးဘူး။"ချွတ်တား" ဆိုတာ အသက်အရွယ်ကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းကို ပြောတာ။ ဟုတ်ပီလား။ ငါ လူငယ်တွေကို အထင်မသေးပါဘူး။မီးဒုတ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( "လုပ်စမ်းပါ မင်းက ဘာတွေများ ဆွေးနွေးချင်လဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နိုင်ငံနိုင်ငံ ပြည်သူပြည်သူ အလာကား ရတိုင်း လာမပြောနဲ့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ စကားနိုင်အောင် ပြောချင်တိူင်း ပြောလိူ့ရတယ် ဆိုတာလည်း သိထားလိုက်ဦး" ) ................ တဲ့။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”အစောက ငါမေးထားတာပဲ ဖြေစမ်းပါအုန်း။ မင်းရဲ့ "စစ်သားစိတ်ဓါတ်" ဆိုတာကို လုပ်စမ်းပါ။ လေ့လာမှတ်သားရတာပေါ့။မီးဒုတ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( "စစ်သားစိတ်ဓါတ် ဆိုတာ အစိုးရ ဘာဖြစ်ဖြစ် မျိူ်းချစ်စိတ်ရှိရှိ တပ်မတော်ကို ထိခိုက်မဲ့ဟာတွေ ပြောစရာမလိုဘူး။" ) ................ တဲ့။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”ကောင်းပီ.. ဒါဆို တပ်မတော်ကို လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်တွေက ဖျက်ဆီးနေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတာ စစ်သားကောင်း ပီသတယ် လို့ မင်း ဆိုလိုချင်တာလား။တော်တည့်မှန်ကန်စွာ သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေမှသာ စစ်သားကောင်းဖြစ်မယ်။ မှတ်ထား။မီးဒုတ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( " နိုင်ငံအတွက် စဉ်းစားရင် အကုန်ပါအောင် စဉ်းစား၊ လက်တွေ့ အခြေနေပေါ် မှုတည်ပြီး လုပ်နိုင်မှ ရမယ်။ အပြစ်ပြောနေရုံနဲ မပြီဘုး " ) ................ တဲ့။“ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ”ဟ.. မှားနေတာကို ထောက်ပြတာ အမှန်ပြင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့။ အဲလို ပြောတဲ့လူတွေက ဘာတွေရင်းပြီး ပြောရတယ်လို့ မင်းထင်နေလဲ။ရေလိုက်ငါးလိုက်နေ၊ ငါ တပ်ချုပ်ဖြစ်မှ “ပြင်ပေးမယ်” ဆိုတာ တော့.. အင်း...မီးဒုတ်
ကိုယ်အမှုအ၇ာ ၇ိုင်းစိုင်းတာ အဖေ ယုတ်လို.နှုတ်အမှုအ၇ာ ၇ိုင်းစိုင်းတာ အမေယုတ်လို.သံယာတော်တွေကို ခေါင်းခွဲတာ နင်တို.အဖေယုတ်လို.အခုလို နှုတ်ကြမ်းတာက နင်တို.အမေ ယုတ်လို.ပေါ.နော်
တူ သော အ ကျိုး ပေး ပါ လိမ်. မယ် ၊အ ကု သိုယ် က ကောင်း ကျိုး ချမ်းသာ ပေး တယ် ဆို တာ ထုံး စံ မ ရှိ ပါ ဘူး ဗျာ ။
( "တစ်မျိုးလုံး ယုတ်တယ် ဆိုတာ ...ါ်ါ်ါ်ါ်ါ် တစ်မျိုးလုံးလား..ဘယ်အမျိုးလဲ ???????? " )........... လို့ ဟဟဟ က ပြောတယ်။ )ဟဟဟ ရေ..ပညာတတ်တယ်ဆို ဆက်စပ် စဉ်းစားကြည့်လေ.....ko lin က ဘယ်သူ.အကြောင်း ပြောနေတာလဲလို. ..ဒါကြောင့် ပြောတာဘာတွေများ ရထားလို.ပါလိမ်... ဒီလောက် အထိမခံ ဖြစ်နေတာ..:Dsimple views
ပြည်သူ့ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြည်သူ့ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သမ္မတ)ဦးတင်ဦး (ဒုသမ္မတ - ၁)ဦးဝင်းတင် (ဒုသမ္မတ - ၂)ဦးဥာဏ်ဝင်း (၀န်ကြီးချုပ်)ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် (ဒုဝန်ကြီးချုပ် -၁)ဦးမင်းကိုနိုင် (ဒုဝန်ကြီးချုပ် -၂)ဦးဝင်းထိန် (ကာကွယ်ရေး)ဒေါ်ဝေနှင်းပွင့်သုန် (နိုင်ငံခြားရေး)ဦးထွန်းအောင်ကျော် (ပြည်ထဲရေး)ဦးအုံးကြိုင် (ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်)ဦးခွန်ထွန်းဦး (ကုန်သွယ်ရေး)ဦးမင်းဇေယျ (လယ်ယာနှင့် သစ်တောရေးရာ)ဦးကိုကိုကြီး (ပို့ဆောင်ရေး)ဦးဌေးကြွယ် (သာသနာရေး)ဦးစိုင်းသိန်းဝင်း (နည်းပညာနှင့် လျှပ်စစ်)ဦးပြုံးချို (စက်မှုလက်မှု)ဦးဂျင်မီ (မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း)ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး (နယ်စပ်ရေးရာ)ဒေါက်တာလွမိးဆွေ (ပြန်ကြားရေး)ဦးမိုးသီးဇွန် (ဆက်သွယ်ရေး)ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် (ကျန်းမာရေး)ဦးဖေအောင် (ပညာရေး)ဒေါ်ဇိုရာဖန်း (လူမှုဖူလုံရေး)ဒေါ်နော်အုံးလှ (ယဉ်ကျေးမှု)ဦးအောင်လင်းထွဋ် (အမျိုးသားလုံခြုံရေး)ဦးဟန်သာမြင့် (ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်)
ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူ က ပြောတယ် ........ ( " အေးအေး .. ပေးတယ်..... ထိုင်းနယ်စပ်က ဒုက္ခသယ်စခန်းမှာပဲ ရမယ်။ " ) ................ တဲ့။ဆန့်ကျင်ဖက်ဝေဖန်သူမင်းမလဲ စီဘောက်ထဲ ခန့်တဲ့ ရာထူးကိုတောင် လိုက်ပီး မနာလိုဝန်တို ဖြစ်နေသေးတယ်။ သူတို့တတွေကမှ ပြည်သူတွေ ရင်ထဲက ခန့်အပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကွ။မကျေနပ်ဘူး ဆိုရင် မင်း ဆရာသမားတွေကို ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရအောင် လုပ်ခိုင်းပေါ့။မင်းကိုးကွယ်နေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ အုပ်ချုပ်လာတဲ့ နှစ် ၂၀ အတွင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲကနေ ပြည်သူတွေရဲ့ လေးစားယုံကြည်မှု ရအောင် ယူနိုင်ခဲ့ရင် ပြည်သူတွေ ရင်ထဲက ခန့်အပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ စီဘောက်ထဲမှာတောင် ပေါ်ပေါက်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။မီးဒုတ်
Simple View မင်းအစားသနားတယ်ကွာ..မင်းဘလောဂ်ကယောက်ကျားတွေကိုရန်တိုက်ပေးနေတဲ့ဘလော့ဂ်ပဲ..အောက်သွားမရှိတဲ့နွားဒီမိုကြီးတွေက မင်းဖင်နှိုက်ပြီး ..အဲ မှားလို့....မင်းမျက်နှာလိုက်ပြီးစောက်ရှက်မရှိ..လိုက်ထောက်ခံပြီး..အကုန်လုံးကိုလိုက်ကိုက်နေတယ်...ဥပမာ..မီးဒုတ်တို့...ငဘတို့လိုကောင်တွေပေါ့ကွာ.မင်းကလည်းယောက်ကျားတွေ..လီးလချီးစုံအောင်ဆဲနေတာကိုအရသာခံအဖုတ်နှိုက်ပြီးကြည့်နေနိုင်သေးတာ..အံ့ပါရဲ့..
အော် ဒုက္ခ.. လူမှားဟောင်နေတဲ့ ခွေးလဲရှိသကိုး...ဘလော့မှာ ပို.စ်အသစ်မတင်နိုင်လို.စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာအချိန် စီဘောက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေက ဘယ်လို.လုပ်ပြီး ပို.စ်အောက်မှာ ကွန်မန်.အနေနဲ.ရောက်နေပါလိမ့်လို. ခေါင်းတွေ ချာချာလည်အောင်စဉ်းစားရင်း နည်းပညာတွေ လိုက်မမီအောင်ပဲ တိုးတက်သလား ကိုယ်ပဲ မျက်စိမှားသလား ဒွိဟဖြစ်ရင်း....လေးစားစွာဖြင့်simple views
26 October 2010 at 00:13
simple view ခွေးမ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အသားလွတ် ဝင်ဆဲသွားတာ ဘယ်က အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေကဝ လဲကွ
Simple Views,Whatever the case, it'sanice surprise, isn't it ?So you don't need to scratch your head over this puzzling question.:) I feel it should beapleasant surprise for all of us to have (at least) the following discussions (permanently) documented here ;[ These invaluable discussions should serve as lectures for those whose knowledge of Burma's independence movement and the 8888 people's democracy movement is as restricted as that ofajilbab-clad lass. ] :(1) Ko Nga Ba's accurate and comprehensive accounts of the political significance of the unique 8888 uprising,in contrast tothe silly poisonous descriptions by the uninformed junta minion that the main components of the nationwide anti-BSPP protests were decapitations.(2) Ko Mee Dote's just defence of Ko Sai Thein Win,and proper criticism of the unreasonable and extravagant nuclear projects,in contrast tothe unfounded malicious accusations by the evil-minded ignorant junta minion against the patriotic major,and his mistaken assumption that he would be permitted to give proper suggestions to his superiors at these projects, once back in the homeland.(3) Ko Pyi Thu's vivid comparison of the restricted world view of the despot's menials, as that of jilbab-clad female followers of the Islamic faith.Truth
သန်းရွှေ ဖင်ဂေါင်းကျယ်ပါတယ် အောင်းမေ့တယ် ..... လက်စသပ်တော့ ဒီချီးတုတ်က အလံခိုးထားတာကိုး။ :Dဒီကြားထဲက သန်းရွှေ အလံခိုးတာကို မစားရမသောက်ရ ၀င်ပြီး ဂုဏ်ယူနေတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိသေး။စိတ်လေတယ်။တပ်ကတော့ ဦးဏှောက်မဲ့တွေ သိပ်များပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တော်တော် ရှက်စရာ ကောင်းနေပြီ။vi848
တပ်က ဦးဏှောက်မဲ့တွေဥပမာ - (1) "ငဘရဲ့အဖေ" (စီဘောက်မှာ ငဘကို အသားလွတ်ဆဲပြီး အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ စကားတွေ ရေးသူ - 25 Oct 10, 05:58 PM)ဥပမာ - (2) "အမြင်မတော်သူ" ( "ခေတ်သစ်ဖွတ်" ပို့စ်အောက်မှာ "ငဘ နဲ့ မီးဒုတ်က အကုန်လုံးကို လိုက်ကိုက်နေတယ်" ဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ကွန်မန့် ရေးသူ - 25 Oct 10 17:53)
>>>>> Anonymous (the commentator above at 26 October 2010 15:06) +>>>>> the guy who misused my name in C-Box (26 Oct 10, 08:40 AM)dont abuse me. dont abuse my name. i gonna ban you when i m back.simple views
မင်းတို့ ရုရှားက ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား
မင်းတို့ ရုရှားက ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလားတုတ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ သားပြောမယားပြော မကလို့ ပြည့်တန်ဆာပြော လာပြောသွားတဲ့ ရုရှားက IP က အခု ဇော်ရဲ့ IP နဲ့ တခုတည်းပဲ။ တုတ်ကြီးနဲ့ဇော် တယောက်တည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ တယောက်တည်း မဟုတ်ရင်တောင်မှ မိတ်ဆွေရင်းချာ ဖြစ်မှာတော့ သေချာတယ်။ဒီတော့ မင်းတို့ ရုရှားက ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား။ အဲဒီလို လူမဆန်တာကို အချင်းချင်း ထိန်းရင်ထိန်းပါ။ မထိန်းနိုင်ရင်တော့ ဒီ IP ကို ဘန်းတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ မော်စကိုကနေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စာလာဖတ်နေသူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီမှာလည်း ဒီ တုတ်ကြီးနာမည်နဲ့ရော၊ sv ယောက်ျားနာမည်နဲ့ပါ ဒီ IP နဲ့ လာရေးဖူးတယ်။ ခက်တာက ကျွန်မဆီမှာ ရုရှားကနေ ကောင်းတဲ့စစ်သားတွေလည်း စာလာဖတ်နေတာ ရှိတော့ ပိတ်လိုက်ရင် တယောက်နှစ်ယောက်ကြောင့် အများထိခိုက်မှာ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ တုတ်ကြီးတို့၊ sv ယောက်ျားတို့ Zaw တို့ဆိုတဲ့ ကလေကချေ စစ်သားတွေ မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ရုရှားက ကောင်းတဲ့စစ်သားတွေ အများကြီးစာလာဖတ်နေတာ ရှိပါတယ်။(အစ်မငယ်နိုင်ဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်)
SV ယောက်ကျားနာမည် သုံးပီး လာလာ ရေးနေတဲ့ ရုရှက စစ်ဗိုလ်ရေ .....မင်းက SV ယောက်ကျား နာမည် နဲ့ ကလေးကွက် သုံးပီး SV ကို လာလာ တိုက်ခိုက်နေတာက ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဖြစ်နေပီကွ။ဒီလို အောက်တန်းကျကျ နည်းလမ်း နဲ့ မဟုတ်တာတွေ ရေးပီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတာ မင်း ယောကျာ်း မဟုတ်လို့ပေါ့ကွာ။ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် ဆိုတဲ့ မင်းရဲ့ အရည်အချင်းက ဒါပဲလား။မင်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက် နဲ့ ပြောရာမှာ အခုလို အောက်လမ်းနည်းကို သုံးတယ် ဆိုတော့ မင်းဟာ ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် မပြောနဲ့ ... သာမန် ယောကျာ်း တစ်ယောက် ရဲ့ အနိမ့်ဆုံး ရှိရမယ့် အဆင့်အတန်းတောင် မရှိတော့ဘူး။မင်း မရှက်ဘူးလား။ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ သိက္ခာကို ထိန်းပါဦးကွာ။မင်းကိုယ်မင်း ယောကျာ်းလို့ ထင်နေသေးရင် ယောကျာ်းပီပီသသ ဝါဒချင်း၊ အယူအဆချင်း ယှဉ်ပြိုင်ပီး ငြင်းပေါ့ကွ။ကောင်းစေလိုသူ
SVI noticedasavage disgracing you by writing insulting messages to you by using an inappropriate nickname in your C-Box. What's more, another junta slave unnecessarily misused your name inahumiliating manner, while he was talking to another guest in the C-Box.ZZ Top
လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှုသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤ စာမျက်နှာမှ စာများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေ (သို့) သူငယ်ချင်းများ သို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကူးယူဖော်ပြ မျှဝေသုံးစွဲမည်ဆိုပါက ဤစာမျက်နှာ ၏ Owners များထံမှ ခွင့်တောင်းပြီးမှသာ ဖော်ပြပေးပါရန် လေးနက်စွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Everybody has the same right to visit my blog and write in the cbox . Please feel free to write your ideas or opinions or feelings about our country . It's the place where you can open your heart. Thank you.
ပြေးကား ပြေး၏ မရောက်............
NO VOTE ON7OF NOVEMBER 2010
လှည့်ကွက် ...လှည့်ကွက် ....လှည့်ကွက်........လှည့်က...
ကျမ နဲ. နိုင်ငံ့အရေး
အာဆီယံ အစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြို့တော် မနီလာမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ လုံခြုံရေး မစိုးရိမ်ရ .
အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေ လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ Quiapo Church အနီးမှာမနေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသသတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။...
*ကာတွန်း ညီပုချေ - သောက်ကျိုးနည်း*
*(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၇*
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၂၄ ဧပြီလ ၂၀၁၇)
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - http://goo.gl...
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအား အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများအမြန်ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့်
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)ပါတ်ကျော်ကျော်လောက်တုန်းက ဆိုပါတော့။ အတိအကျပြောရရင်တော့ (၂၀၁၄.မတ်လ.၁၉)နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ အဆာဟိ ( ASAHI) သတ...
(သတိ - ကဗျာမဟုတ်ပါ)
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှား...